Как ламинировать волосы желатином: Ламинирование волос желатином в домашних условиях — ИНСТРУКЦИЯ — Интернет-магазин отличной мебели в Тюмени — «Магазин Мебели 72»
|Разное|Как ламинировать волосы желатином: Ламинирование волос желатином в домашних условиях — ИНСТРУКЦИЯ
Ламинирование волос. Что нравится делать дома желатин, профессиональные инструменты
Ламинирование краской для волос
Как делают ламинирование волос в то время
Итальянская ламинация шелка Constant Delight
Ламинирование с эффектом шампуня
Как принимать желатин внутрь для роста ногтей и волос. Маски для волос из желатина
Мой опыт использования желатиновой маски для волос
1. Сухие волосы — да, жирные — нет
2. Тарелки и гранулы — без разницы
4. Соотношение с водой — 1: 5
5. Деликатный обогрев
6. Корни — запрещены
7. Мытье головы — универсальный способ
8. Маски — на плотной основе
9. Смыть — только теплой водой
10. Частота — дополнительно
Маски для волос с желатином, горчицей и другими ингредиентами
Самодельное ламинирование волос желатином для выпрямления и сияния волос
ကျနော်တို့ желатин မပါဘဲ အိမ်မှာ ဆံပင် ламинирование လုပ်ဆောင် —
ဂျယ်လီ — အခမဲ့ ရေ နံ ламинирование
အိမ်တွင်း ရေ နံ အလွှာ ပါး
ဗာ ဒံ သီး
ကြက်ဥ နှင့် အတူ မျက်နှာဖုံး
Майонез လမိုင်း မျက်နှာဖုံး
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၏ အနှစ်သာရ
အားသာချက်များ နှင့် အားနည်းချက်များကို
တစ်ဆင့် ပြီး တစ်ဆင့် ညွှန်ကြားချက် များ
ရေးစပ် သီ ကုံး
အိမ်သုံး ဆီ မွှေး
Ламинирование ၏ အနှစ်သာရ က ဘာလဲ?
Желатин အလွှာ အဆင့်
အာဖရိကန် желатин — အခမဲ့ техника ламинирования ကို
Castor ရေ နံ ламинирование မျက်နှာဖုံးများ
Ламинирование ပြီးနောက် ဆံပင် စောင့် ရှောက် မှု
Желатин ကို ဘာ အစားထိုး နိုင် သလဲ။
ဆ န့်ကျင်
ဆံပင် ламинирование များအတွက် ချက်ပြုတ်နည်းများ
အုန်းနို့ နှင့် အတူ
ဆံပင် ламинирование က ဘာလဲ?
အ ဘယ်အရာ ကို ဆံပင် ламинирование ပေးသည်
အိမ်တွင်ဆံပင်၏ gelatin lamination
Gelatin နှင့် Balm နှင့်အတူဆံပင်များအတွက်မျက်နှာဖုံး
ဆံပင် laminating များအတွက်ရေးစပ်သီကုံး
အိမ်မှာဆံပင် laminate ကိုဘယ်လို
ဂျယ်လီ — အခမဲ့တောင်ပိုင်းမျက်နှာဖုံး
ဂျယ် လိတ် မဲ့ အိန္ဒိယ မျက်နှာဖုံး
Желатин မပါဘဲ ရိုးရာ မျက်နှာဖုံး
Льняное семя богато клетчаткой, жирными кислотами и витаминами. Оно поможет при проблеме секущихся кончиков, так как содержит жирные кислоты, которые восстанавливают волос и разглаживают его чешуйки. Клетчатка – это строительный материал, подарит мягкость шевелюре и усилит рост волос. Витамины, содержащиеся в льняном семени, восстанавливают поврежденные участки волоса, лен тоже создает невидимую плёночку, чтобы защитить волос.
для вьющихся волос практически не отличается от процедуры для прямых волос. Алгоритм во всех случаях одинаковый, учитывая возможность ламинирования дома.
1 столовую ложку желатина разводить3столовыми ложками воды. Сразу добавлен один яичный желток. Затем смесь наносили на волосы.
Надеть полиэтиленовый колпачок и завернуть в полотенце. Затем сверху фен нагревают полотенца 10-15 минут. После этого смесь держали на голове около 40 минут.
Последствия ламинации часто связаны с общим состоянием замков клиента, мастерством мастера, а также с качеством средств ламинирования.
Что это — ламинация волос, рассказ эксперта:
Роскошные, густые и блестящие волосы — это женственно и красиво.В поисках уникального препарата женщины всего мира тратят баснословные средства, движимые желанием добиться идеального результата раз и навсегда. Такой поиск только в руках индустрии красоты, которая каждый год балует нас новым «чудодейственным средством». Одной из относительных новинок, которая, однако, крайне положительно влияет на состояние волос, является ламинирование. Обработанные особым химическим составом волосы меньше расслаиваются, приобретают невероятный блеск и гладкость. Дело в том, что аппарат «окутывает» волосы капсульной пленкой, которая защищает их от травмирующих воздействий, не нарушая процесса дыхания.Пленка устраняет шероховатость волос и «запечатывает» секущиеся кончики. Существенные недостатки такого ламинирования: дороговизна (от 1600 руб.) И кратковременный эффект (не более месяца).
Однако не многие знают, что салонную процедуру можно проводить дома не только без потери качества и со значительной экономией, но и с натуральными ингредиентами, доступными каждой хозяйке. Из подручных средств понадобится около 50 мл горячей воды, полиэтиленовая пленка и полотенце… пищевой желатин. Для склонных к сухости волос мы также запастемся питательным кондиционером или маской.
Ламинирование желатином в домашних условиях, кроме состава, отличий от салона практически нет. Чтобы желатин растворился в воде, следует добавить маску (для сухих волос) или бальзам (для нормальных волос) и тщательно перемешать полученную массу до консистенции сметаны. Когда желатиновая маска будет готова, волосы следует вымыть обычным способом, желательно с использованием кондиционера.Затем нанесите на волосы заранее приготовленный желатин, подсушив их небольшим полотенцем. Максимальный эффект полученной маски достигается при ее нагревании. Добиться высокой температуры и «парового эффекта» можно, создав на голове конструкцию из полиэтиленовой пленки и полотенца. Для любителей погорячее — теплые волосы феном над полотенцем не более 10-15 минут. Через 40-45 минут маску следует смыть, для чего волосы достаточно смыть прохладной водой. Влажным волосам дают высохнуть естественным путем.Результат превзойдет все ожидания: безупречно гладкий и блестящий, волосы к волосам, локоны изменили свой внешний вид.
Итак, судя по порядку применения препарата и полученному эффекту, можно смело сказать, что домашнее ламинирование волос желатином ничем не отличается от дорогого салонного аналога. Использовать желатин для волос не только дешево, доступно и эффективно, но и невероятно экологично. Состав салонных средств для ламинирования для непосвященных часто остается загадкой, а желатин абсолютно прозрачен по составу.К тому же ежемесячное поддержание эффекта ламинирования в салоне влетит в копеечку, а использование желатина для волос на кармане не ударит.
Желатин — конечный продукт денатурации (обработки) соединительной ткани животных (кожи, костей, хрящей, сухожилий).Другими словами, это чистый белок коллагена. Внешне он выглядит как вязкое и прозрачное вещество без запаха.
Но почему обычный желатин в последнее время приобрел такую ​​бешеную популярность?
Ответ прост. В наше время мода на натуральную косметику растет не по дням, а по часам. А желатин, как известно, недорогое и полностью натуральное средство.
Продается абсолютно в любом продуктовом магазине. Стоит только протянуть руку, и теперь вы держите пакетик с порошком, в котором есть целый комплекс полезных веществ: белок, витамины Е и В, минералы и микроэлементы.
ВАЖНО : Благодаря богатому составу желатин ухаживает за волосами, улучшает их внешний вид, а также защищает от непогоды и солнечных лучей. Чаще всего желатин используется для приготовления масок и создания эффекта ламинирования.
При нанесении смеси на волосы каждый отдельный волос заворачивается в тонкую прозрачную пленку. Эта пленка не только выравнивает структуру волос и заполняет все их неровности, но и оказывает укрепляющее и защитное действие.
При этом волосы дышат, получают необходимое питание и увлажнение, выглядят более густыми и гладкими, при этом пленка надолго защищает их от всех вредных воздействий окружающей среды (солнце, ветер, холод, пыль). Маски со съедобным желатином пойдут на пользу волосам только при правильном приготовлении.
Есть несколько нюансов приготовления домашней смеси :
Подробнее о приготовлении и применении желатиновой маски для волос смотрите в видео ниже:
выравнивание и укрепление волос, придание им здорового сияния;
Как и любое средство по уходу, продукт на основе желатина помогает одним, а может навредить другим. Почему это могло произойти? Во-первых, если не соблюдаются правила приготовления и нанесения смеси, описанные выше. Во-вторых, при индивидуальной непереносимости желатина.
волосы могут стать слишком жесткими;
: в некоторых случаях желатин смывается с трудом;
Маски с желатином не имеют строгих противопоказаний. Но при их использовании нужно обращать внимание на несколько ограничений :
обладательницам сухих и смешанных волос нужно соблюдать осторожность и хранить средство не более получаса;
аллергикам следует сначала нанести маску на тыльную сторону ладони и только при отсутствии аллергии на волосы;
Если на коже головы есть раздражения, раны или воспаления, то желатин никогда не должен попадать на кожу.
Мы разобрались, что такое желатин, чем он полезен для волос и как действует на волосы, перечислили все его плюсы и минусы. Суммировать. Желатин чаще приносит пользу или вред волосам? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, потому что все мы индивидуальны, и одни и те же средства могут по-разному влиять на разных людей.
Если обратиться к мнениям о желатине на сторонних интернет-ресурсах, то мы увидим множество положительных отзывов о его применении для завивки, что, несомненно, свидетельствует о популярности и эффективности пищевого желатина в уходе за волосами.
Миллионы женщин уже попробовали это удивительное натуральное средство, попробуйте и его! Кто знает, может, желатиновая маска преобразит ваши волосы!
О домашнем ламинировании волос желатином слышали все. Я не был исключением. Перед тем, как нанести на свои вьющиеся волосы чудесный состав, я стала следить за статьями и отзывами о вреде и пользе желатина для волос. Читайте ниже результаты моей проверки.
Преимущества желатиновой маски для волос описаны в Интернете по-разному.Это и многие рецепты использования инструмента, и сравнительные фото «до», «после» и видеообзоры. Скажу так, желатиновая маска для волос используется для воссоздания салонной процедуры ламинирования в домашних условиях.
Ламинирование — это процедура покрытия волос специальным составом, чтобы сделать их более послушными, гладкими, блестящими и шелковистыми.
Естественно, не у всех есть желание и средства посещать салоны ламинирования профессиональными средствами (а повторять это нужно каждый месяц).Поэтому находчивые девушки выбрали методы использования недорогих подручных средств для получения желаемого результата. Речь идет о желатиновых масках для волос. Почему во множественном числе? Да потому что количество их рецептов не сосчитать. Самый простой способ — желатин + вода.
В зависимости от степени повреждения волос количество желатина варьируется (от столовой ложки до стакана воды, от двух столовых ложек до трех — воды). Точнее, у каждой девушки есть свой рецепт маски для волос с желатином.
Прочитав всю эту информацию, я решила попробовать желатиновую маску на своих кудрявых волосах. Но больше часа не держала (некоторые девушки даже маску оставляют на ночь) и использовала с выпрямляющим бальзамом. Результат — меньше «пушистости» на макушке, но особого блеска или мягкости я не заметила. Напротив, волосы стали жестче. Продолжать эксперименты не буду.
Вы пробовали сделать маску для волос из желатина? Какие результаты наблюдаю и пишите свои рецепты!
Желатин — отличное средство для волос, придает им здоровый и ухоженный вид.Поскольку химическая основа этого вещества — коллаген, главный связывающий белок человеческого организма, желатин естественным образом восстанавливает волосы. Он обволакивает каждый волос и защищает его от вредного воздействия внешних факторов, а также восстанавливает естественную структуру волос.
Ламинирование волос — одна из восстанавливающих процедур для волос. В домашних условиях делают ламинирование желатином. На волосы наносится специальная смесь на основе пищевого желатина, которая обволакивает их по всей длине.После процедуры они быстрее растут, восстанавливается их структура и возвращается живой блеск. Ламинирование делают и обладательницы вьющихся волос — после процедуры волосы становятся послушными и укрепляются.
Приготовить желатиновую смесь для ламинирования несложно. Для этого столовую ложку сухого пищевого желатина разводят в трех столовых ложках теплой воды. Если волосы длинные или густые, можно сделать больше смеси, но при этом следует соблюдать пропорции. Для нормальной консистенции смеси необходимо в три раза больше воды, чем желатина.Затем состав оставляют на полчаса и более, чтобы он набух. Если смесь не становится однородной, остаются комочки, то ее нагревают на водяной бане до образования кашицы, по консистенции напоминающей густую сметану. Главное, смесь не доводить до кипения. Чтобы не обжечь кожу головы и не повредить волосы, нанесите остывший состав. Если на упаковке указан другой способ разведения желатина, необходимо использовать его, но соблюдая необходимые для ламинирования пропорции.
Перед процедурой нужно хорошо вымыть волосы шампунем и ополоснуть кондиционером, можно нанести смягчающий бальзам или маску.Волосы легко пропитываются банным полотенцем, но не сушатся. Смесь желатина равномерно распределяется по всей длине волос, избегая корней. Затем оборачивают пищевой пленкой или надевают пластиковую шапочку и сверху накрывают натуральным полотенцем. Можно аккуратно прогреть линию роста волос феном на полотенце четверть часа, чтобы желатин лучше проник в волоски. Еще через полчаса желатиновую смесь нужно тщательно смыть теплой водой и оставить волосы до естественного высыхания.
Результат такого ламинирования зависит от индивидуальных особенностей волос, но, несомненно, при правильном применении процедура будет эффективной. Можно повторять ламинирование желатином каждые две недели, но не делайте процедуру долго. Перед процедурой убедитесь в отсутствии аллергии и противопоказаний.
На основе пищевого желатина можно сделать эффективную косметику для волос — маски, которые не только восстанавливают волосы, но и ускоряют их рост.Перед нанесением маски тщательно вымойте волосы. Маску наносят на влажные локоны на четверть часа, затем укутывают волосы полиэтиленовой пленкой и банным полотенцем. Если волосы сильно повреждены, их можно нагреть над полотенцем феном в условиях низкой температуры. Это обеспечит полное разложение желатина и усилит действие маски. Не рекомендуется наносить маску на корни и на кожу головы — она ​​стягивает кожу и может вызвать шелушение при длительном воздействии.
Существует множество вариантов желатиновых масок, в желатиновую смесь можно добавлять те компоненты, которые подходят для того или иного типа волос. Основой таких масок всегда должен быть желатин и вода в пропорции 1: 3. Если пищевой желатин плохо растворяется, его можно нагреть на водяной бане.
Самый простой рецепт — столовую ложку средства растворить в двух-трех столовых ложках теплой воды, а когда смесь станет однородным гелем, распределить по всей длине прядей.
Для жирных волос можно сделать маску с яичным желтком. Для этого возьмите столовую ложку желатина, сухой горчицы и бесцветной хны. Сначала желатин заливается теплой водой, когда он полностью растворится, добавляются остальные ингредиенты.
Яблочный уксус может усилить эффект. К желатиновой массе добавить чайную ложку неконцентрированного яблочного уксуса и несколько капель репейного, оливкового или шалфейного масла.
Можно заменить воду свежевыжатым соком лимона, яблока, моркови.Или отвар из трав. С желатином хорошо сочетаются крапива, корни лопуха, ромашка, тимьян и шалфей.
Поскольку это вещество очень вязкое, использовать косметический желатин нужно осторожно. В противном случае волосы будут слипаться, а кожа головы подтянутся, то есть положительного эффекта не будет. Смывание желатиновой смеси может занять много времени.
Чтобы желатин хорошо смылся, нужно хорошенько приготовить смесь. Самым важным аспектом в этом случае является однородность и консистенция смеси.Если в маске остались гранулы желатина, прогрейте ее и перемешайте, чтобы в итоге не осталось твердых частиц. Такая маска плохо смывается с волос, даже если они слишком густые. Основная желатиновая каша по консистенции должна напоминать густую жирную сметану или гель. Маску можно немного взбить, но так, чтобы не образовывалась сплошная пена. При необходимости можно добавить в него теплую воду. Плохо перемешанная маска склеит волоски и выпадет.
Если волосы вьющиеся или непослушные, то в желатиновую смесь можно добавить несколько капель бальзама — это облегчит смывание.
Рекомендуется следить за тем, чтобы желатин не застывал на волосах: для этого понадобится полиэтиленовая пленка и натуральное полотенце поверх волос. Такую маску смойте теплой водой без шампуня, пока смесь полностью не останется на волосах. Затем полоскание ополоснуть прохладной водой.
Наконец, можно нанести бальзам на линию роста волос или смыть отваром лечебных трав. Не рекомендуется сушить волосы феном. Чтобы удалить остатки желатиновой маски, сухие волосы расчесывают тонкой расческой.
Обычный пищевой желатин — кладезь полезных веществ для волос. Весь секрет кроется в его строении и химическом составе. Синтезируется это вещество из продукта животного происхождения, реже из продукта растительного происхождения, то есть желатин полностью натуральный. Поэтому для волос хорошо воспринимается косметика на основе этого продукта.
Основным структурным элементом желатина является коллаген — соединительный белок. Действует на кожу головы и волосы.Коллаген хорошо проникает в ткани и заменяет отсутствующие или поврежденные клетки, таким образом, коллаген укрепляет и восстанавливает волосы и кожу. Особенностью коллагена, входящего в состав желатина, является его размер. Обычные молекулы коллагена слишком велики, чтобы проникать непосредственно в клетки. Но желатин содержит гидролизованный белок, который по размеру намного меньше обычного коллагена. То есть он уже находится на одной из стадий разложения, и организм не тратит энергию на дополнительные химические реакции, а просто «впускает» гидролизованный коллаген в ткани.Благодаря коллагену волосы становятся гладкими и эластичными, улучшаются свойства кожи, нормализуется питание тканей. Коллаген хорошо действует на пряди, которые повреждаются при окрашивании. Этот белок участвует в восстановлении естественного цвета волос.
Помимо коллагена для волос полезны аминокислоты, 18 из которых содержат желатин. Большинство этих аминокислот необходимы для здоровых локонов.
Аланин участвует в обмене веществ, он очень полезен для улучшения обмена веществ в тканях.
Глицин нормализует внутриклеточные обменные процессы и укрепляет капилляры. Эта аминокислота нужна для улучшения питания волос и кожи головы.
Глутаминовая кислота нормализует липидный и углеродный обмен, стимулирует окислительные реакции, но, самое главное, выводит из тканей аммиак и устраняет негативное действие этого вещества. Поэтому желатин очень полезен тем, кто красит волосы.
Лизин — незаменимая аминокислота, без которой ткани не регенерируют и не растут, а ферменты — катализаторы химических реакций в тканях не образуются. Без лизина волосы будут расти медленно, а последствия повреждения будут заметны очень долго.
Оксипролин необходим для образования эластина — белка, который позволяет тканям восстанавливаться, кроме того, он делает волосы эластичными.
Пролин укрепляет структуру волос, вместе с аскорбиновой кислотой принимает участие в окислительных реакциях, то есть пролин также улучшает обмен веществ.
Пищевой желатин также содержит микроэлементы, необходимые для волос и кожи головы — железо, магний, натрий, калий, кальций, натрий и фосфор.
Таким образом, желатин по своему составу и действию — идеальное средство для поврежденных, тусклых и слабых локонов. Он усиливает рост волос, защищает и укрепляет их, улучшает питание, возвращает волосам блеск и естественный цвет.
Желатин может нанести вред, если смесь приготовлена ​​неправильно, слишком часто используются желатиновые маски или производится ламинирование желатином.Волосы станут жесткими, непослушными, тяжелыми и объемными, при злоупотреблении желатином могут выпасть. Также они принесут вред, если локоны сильно повреждены и ослаблены — соединения желатина могут нарушить белковый баланс тканей. Не рекомендуется использовать их, если волосы восстанавливаются другими средствами.
Пищевые добавки, которые производители желатина иногда добавляют для улучшения соединительного эффекта, вредны для волос. Поэтому перед приготовлением смеси следует внимательно изучить состав продукта или приготовить желатин в домашних условиях.
Смеси желатина следует наносить на кожу головы очень осторожно: если оставить маску на коже, может начаться шелушение, покраснение и зуд. Обычно желатин хорошо влияет на кожу, но маску на волосах не нужно держать слишком долго — за это время она стягивает кожу и нарушает водно-липидный баланс.
Можно навредить волосам и коже, если кипятить желатиновую смесь — тогда аминокислоты разрушаются. Также нельзя наносить на локоны горячую смесь, чтобы не получить ожоги.
Противопоказания к применению желатиновой косметики:
Использование желатина для волос в последнее время стало суперпопулярным бьюти-трендом. И хотя ведущие косметические бренды еще не в полной мере это оценили, но в различных интернет-сообществах, группах и форумах женщины и девушки азартно обсуждают рецепты домашних масок на основе желатина.Многие уже на собственном опыте убедились, что желатин может стать хорошей альтернативой салонному ламинированию волос. После удачных экспериментов волосы становятся такими же блестящими и эластичными, как после этой дорогостоящей процедуры. И внешний вид волос становится более ухоженным.
Как это хорошо для волос? Обратите внимание хотя бы на эти аргументы:
В этой статье мы не будем подробно описывать все преимущества использования желатина в уходе за волосами: о них уже много написано.Да и минусы разбирать не будем, потому что минусов здесь нет. Вообще. Нет, теоретически возможен один минус — это «недостаток информации». Если вы твердо решили, что ваши волосы не могут жить без желатина, то используйте его с умом. Специально для вас мы публикуем 10 золотых правил, которые нельзя игнорировать.
Желатин действительно благотворно влияет на сухие, ломкие и поврежденные волосы. Укрепляет их структуру, увеличивает объем, повышает эластичность.После желатиновых масок или обертываний сухие и тонкие волосы больше не похожи на куриный пух или жесткую паклю. Но подобное приложение для жирных волос — большой вопрос. Дело в том, что, создавая своеобразную пленку на волосах, желатин частично утяжеляет их. А смелым прядям без этого часто не хватает легкости.
Кулинарный желатин, как известно, выпускается в двух формах — в виде гранул (порошка) и в виде листовых пластинок.Для приготовления масок, которые вы будете наносить на волосы, по большому счету подходят обе. Но листовой желатин на практике часто оказывается менее концентрированным: приготовленный из него раствор не такой насыщенный, как тот, в который было заложено такое же количество гранулированного продукта. Если вы хотите видеть на своих волосах ощутимый результат, все же сделайте выбор в пользу желатиновой пудры.
Желатин всегда следует разбавлять комнатной (или, в крайнем случае, слегка подогретой — не выше 40-45 градусов) водой.Дело в том, что в очень холодной воде он будет сильно разбухать. А от воздействия слишком высокой температуры теряет все свои полезные свойства. Поэтому, пожалуйста, не кипятите желатин в кипящей воде. Это касается и технологии изготовления масок для волос, и кулинарных манипуляций.
Идеальная пропорция разведения желатина водой — 1: 5. Иными словами, на одну столовую ложку желатинового порошка лучше взять5ст.ложки воды. В этом больше нет необходимости: вы собираетесь не варить кисель, а ламинировать волосы. К тому же в небольшом количестве воды крупинки желатина набухают быстрее, впитывая всю влагу, и вам не придется долго ждать. Правильные пропорции в соответствии с длиной волос: для прядей средней длины можно взять2ст. ложки желатина и 10 ст. ложки воды, а для длинных волос — от3ст. ложки желатина и от 15 ст. ложки воды.
Как только желатин набухнет, его нужно будет разогреть, чтобы он растворился в воде: ведь нам нужно нанести на волосы жидкую массу, а не желеобразную субстанцию. Желатин лучше растворять на водяной бане. Если вы делаете это на плите, то внимательно следите, чтобы масса не закипела: точка кипения полностью лишает желатин его основных свойств.
В какой бы форме вы ни наносили желатин на волосы, старайтесь не втирать его в корни волос.Особенно это актуально для обладательниц чувствительной кожи головы. Под воздействием желатина может возникнуть ощущение стягивания или шелушения. Лучше сначала не испытывать дискомфорта.
Не знаете, с чего начать использовать желатин для ухода за волосами? Начните с мытья головы. Отмерьте количество шампуня, необходимое для одного мытья, смешайте его с раствором желатина и вымойте волосы как обычно. Можно даже подержать на голове «коктейль» из желатина и шампуня несколько минут, не смывая, а уже потом смыть теплой водой.Когда пряди высохнут, и вы посмотрите на себя в зеркало, вам станет ясно, оправдал желатин вашим ожиданиям или нет.
В маски для волос с желатином можно добавлять абсолютно любые компоненты — это не заглушит их благотворное действие. Но наиболее комфортная текстура таких масок получится, если под них будет выбрана достаточно толстая основа. Идеальный вариант — яичный желток, который хорошо сочетается с желатином. Кстати, капельки любимых эфирных масел лишними не будут.
Ополосните голову после желатиновой маски или намыливания шампунем, где раствор желатина был замешан, нужна только теплая вода. От невысокой температуры желатин начнет застывать прямо в волосах: отдельные пряди слипаются, и расчесывать их будет довольно проблематично.
Как часто можно баловать волосы препаратами с желатином? Ограничений практически нет.С добавлением этого вещества в шампунь можно мыть волосы через 2-3 дня (у нас, к сожалению, нет информации о пользе или вреде ежедневного использования), маски с желатином обычно делают от одного до четырех раз в неделю.
Если ваши волосы истощены бесконечной травматической укладкой и радикальным окрашиванием, и в результате стали тусклыми, ломкими и безжизненными — пора их спасти! Но не спешите записываться к стилисту, ведь существует множество самодельных хитростей, которые вернут вашим волосам здоровый и сияющий вид.Взять хотя бы желатин. На его основе можно просто и быстро приготовить множество масок, напитков, домашнего шампуня с желатином и даже эффективное средство для выпрямления и ламинирования волос в домашних условиях. По эффективности такая процедура ничем не уступает салонной, и позволяет сэкономить не только финансовые средства, но и время
Для этого можно использовать как животный желатин, так и растительный агар-агар, так как оба они содержат достаточное количество коллагена и других необходимых веществ.Для всех видов желатинотерапии в домашних условиях лучше всего использовать желатин быстрого приготовления: это не только сэкономит время, но и легко получит состав необходимой консистенции.
Важный момент: поскольку желатин является концентрированным источником коллагена, иногда он может вызывать аллергию. Поэтому, если у вас уже была аллергическая реакция на желатин, то не стоит рисковать — даже наружное применение может вызвать нежелательную реакцию.
Регулярное употребление косметики и напитков с желатином может принести огромную пользу организму за счет содержащегося в нем коллагена, а также огромного количества полезных веществ и витаминов.Среди них витамин Е, натрий, магний и белковые протеины. Они не только делают волосы блестящими и послушными снаружи, но и позволяют укрепить их изнутри. Желатиновая терапия помогает избавиться от пересушенных и ломких волос, делая их гладкими, послушными и эластичными.
Желатинотерапия имеет много преимуществ:
Для наружного применения образует на волосах тонкую бесцветную защитную пленку. С его помощью волосы становятся гладкими, послушными и очень гладкими.
Придает объем тонким и редким волосам, делая их гуще.
Придает волосам прочность, защищает кончики волос от поперечного сечения.
Помогает защитить волосы от обезвоживания, а пересушенные волосы насыщают влагой.
Эффективно как для натуральных, так и для окрашенных волос.
Облегчает расчесывание волос за счет того, что волосы становятся более гладкими и послушными.
Но при всех неоспоримых достоинствах желатинотерапия имеет свои недостатки и явные медицинские противопоказания:
Наружное применение желатина утяжеляет волосы за счет нанесения на них защитной пленки, делающей волосы более густыми.
После нанесения желатиновой маски или ламинирования волос перед окрашиванием необходимо подождать несколько месяцев.
Помимо риска аллергической реакции на коллаген, желатиновая терапия крайне нежелательна при: щавелевом диатезе и некоторых хронических заболеваниях почек. Поэтому перед применением желатина не только как косметическое, но и общеукрепляющее средство обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Для того, чтобы волосы были крепкими, здоровыми и блестящими, совсем недостаточно нанести на волосы желатин в виде маски, шампуня или бальзама с желатином или самодельного средства для ламинирования. Комплексная терапия также включает регулярный прием желатина внутрь. . Хорошие новости — значительную часть необходимой дозы можно получить, наслаждаясь разнообразными желе, мармеладом, суфле и другими блюдами из желатина. Но кроме повышенной калорийности, дозы желатина в этом случае недостаточно для улучшения состояния волос.
Есть два основных способа употребления желатина: настойка желатина в воде или молоке.
Для этого вам понадобится: 105 г желатина, (количество, необходимое на месячный курс терапии, вода.
5 граммов желатина (примерно2чайные ложки) залить половиной стакана холодной воды. Затем оставьте смесь набухать на 5-6 часов, а если желатин растворимый, на полчаса. Нагрейте набухшую желатиновую смесь до полного растворения и процедите.
Перед употреблением желатиновую смесь следует разбавить теплой водой или фруктовым соком. Это не только полезно, но и очень вкусно!
Желатин —5граммов, молоко — 100 миллилитров.
Растворить желатин, разбавить 2/3 стакана теплого молока.
В молочно-желатиновую смесь добавьте чайную ложку меда, тщательно перемешайте и дайте смеси набухнуть.
После этого нагрейте смесь до полного растворения желатина, непрерывно помешивая.
Дать остыть. Вкусное и полезное лакомство готово!
На основе желатина можно сделать много интересных масок: для укрепления волос, универсальные маски для всех типов, а также для жирных или сухих волос.В любом случае это настоящая находка для обладательниц тонких и непослушных волос, которым не хватает блеска. В результате ваши волосы преобразятся буквально на глазах, ведь положительный эффект заметен уже после 1-2 применений такой маски .
Важный момент — для приготовления косметики с желатином лучше всего использовать растворимый желатин.
Столовую ложку быстрорастворимого желатина разводят в3столовых ложках воды и тщательно перемешивают.Полученную кашицу нагреть на водяной бане до полного растворения крупинок, остудить.
В готовую маску можно добавить немного фруктового сока — это дополнительно насытит смесь витаминами.
Нанесите маску на2часа, а затем смойте теплой водой.
Это базовая смесь, на основе которой можно приготовить множество других масок.
Смешиваем в равных пропорциях мед, травяной отвар и желатин.Для светлых волос можно добавить отвар ромашки, для темных — крапивы.
Нагрейте полученную смесь на водяной бане до полного растворения желатина, а затем остудите.
Нанесите маску на волосы, держите2часа и смойте.
Второй вариант, способствующий быстрому росту и увеличению объема волос — горчичная маска .
Чайную ложку желатина развести теплой водой и перемешать. В набухшую смесь добавьте 1 чайную ложку горчицы и 1 желток и тщательно перемешайте.
Полученную кашицу нанести на волосы, а через2часа вымыть волосы теплой водой без шампуня.
Для приготовления маски для сухих или жирных волос добавьте в базовую смесь: для жирных волос — 1 желток и чайную ложку лимонного сока. Но сухие волосы буквально преобразятся после маски с добавлением нескольких капель миндаля или любого другого масла.
Шампунь и бальзам с желатином. Пособия и домашняя кухня
Желатин — универсальное средство, на основе которого можно быстро и легко приготовить множество отличных косметических средств, в том числе шампунь или питательный бальзам с его добавлением.Для этого не нужно готовить основу шампуня в домашних условиях, потому что существует гораздо менее трудоемкий и эффективный способ:
Замочите 15 граммов быстрорастворимого желатина в теплой воде, дайте набухнуть.
Добавьте полученную суспензию в свой любимый шампунь и тщательно перемешайте.
Желатиновый питательный бальзам для волос:
Разведите 1 столовую ложку меда в стакане молока. Добавить быстрорастворимый желатин и тщательно перемешать
Нанесите полученный бальзам на волосы после мытья шампунем, подержите 5-10 минут и смойте.
Ламинирование волос в домашних условиях — довольно простой способ превратить тонкие и непослушные волосы в настоящий шелковый водопад. Для этого достаточно повторять эту процедуру раз в месяц, и результат не будет уступать салонной процедуре ламинирования. Об этом также свидетельствуют отзывы трихологов, подтверждающие эффективность такой процедуры, проводимой в домашних условиях, для выпрямления и придания волосам сияющего и ухоженного вида.
Набор для ламинирования волос «Домашний»
Процедура домашнего ламинирования волос может быть однофазной или двухфазной. Двухэтапная процедура включает не только саму процедуру ламинирования, но и предварительное нанесение желатинового шампуня на волосы. При ламинировании после его нанесения волосы нужно снять под шапочку для душа, завернуть в банное полотенце и подержать 40-50 минут. После этого ополосните волосы теплой водой, и можно переходить к самой процедуре ламинирования.Такая многоэтапная процедура, проводимая в домашних условиях, позволит хотя бы на месяц забыть о проблемах с редкими и непослушными или недостаточно объемными волосами.
Но не забывайте регулярно «кормить» волосы новой порцией желатиновой оболочки. Если этого не сделать, волосы быстро приобретут довольно неопрятный вид из-за постепенного отслаивания желатинового покрытия.
Но при ограниченном времени можно полностью ограничиться однофазной процедурой: в этом случае вы просто моете волосы обычным шампунем, наносите бальзам и сразу переходите непосредственно к процедуре ламинирования.
Смесь для ламинирования очень похожа на желатиновую маску и готовится по тому же принципу:
Налейте 1 пакетик желатина (15 грамм) в миску и добавьте стакан теплой воды. Тщательно перемешайте смесь и добавьте в нее бальзам для волос или несколько капель масла (например, миндального).
Нанесите смесь на волосы, отступив примерно на 1 см. От корней до кончиков, ни в коем случае не втирая.
Надеть шапку, обернуть голову полотенцем и подержать 40-50 минут.
После этого вымойте волосы теплой водой без шампуня и — готово!
Я искал вегетарианскую версию метода ламинирования волос желатином, потому что, хотя я жаждал результатов, я не хотел, чтобы на моих волосах были кусочки поросят.Агар-агар часто заменяют желатин в кулинарии и делают его из водорослей (что делает его веганским). Я подозревал, что это не будет работать так же, как желатин на волосах, но я надеялся получить хотя бы немного похожий результат.
Я растворил ложку порошка агар-агара в стакане кипятка. Очень важно сначала растворить агар-агар в небольшом количестве холодной воды, а затем затем добавить кипящую воду — иначе вы получите комки.Я дал этой смеси немного остыть — теперь это немного сложно, потому что если она полностью остынет, она превратится в желе (в этом случае вы можете использовать его как гель для укладки). Вы должны использовать его, пока он еще теплый и имеет консистенцию сиропа.
Я использовала этот сироп в качестве последнего полоскания, взъерошила волосы в ладонях как обычно и высушила на воздухе. Результат? У меня не получилось сделать вид DIY-Encanto, но мои волосы были немного более гладкими и довольно блестящими. Самое главное, что агар-агар установил мои волны , и они сохраняли свою форму в течение трех дней (обычно на третий день мои волны очень вялые, а не с агар-агаром).Вы можете увидеть результат на фото вверху. Я слышал, что результаты даже лучше на тонких волосах (а у меня нет).
Я не заметила, что агар-агар ослабляет завитки моих волос.Скорее, как я уже упоминал, он «сохранял» форму, в которую я их скручивал, в течение более длительного времени.
Если вы все же попробуете агар-агар на волосах, дайте мне знать! Знаете ли вы о других ополаскивателях для волос своими руками для блеска и фиксации?
ယနေ့ခေတ် တွင် အိမ်၌ ဆံပင်ကို ညှပ် သည်မှာ လူကြိုက်များ လာသည်။ အလှပြင်ဆိုင် ထုတ်ကုန် များထဲမှ လူကြိုက်အများဆုံး ပါဝင် ပစ္စည်း မှာ желатин ဖြစ်သည်။ ဒီ နည်းလမ်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီး ရေးသား ထားပြီး ဖြစ်တယ်၊ ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်း က တခြား နည်းလမ်းတွေကို စဉ်း စားဖို့ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ရေ နံ ламинирование အကြောင်း အမျိုးမျိုးသော မျက်နှာဖုံးများ, သူတို့ အသုံးပြုမှု အပေါ် အသုံးဝင်သော အကြံပေးချက်များ ပေး လိမ့် မယ်။
желатин နှင့် အတူ ဆံပင် ламинирование အလွန် လူကြိုက်များ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖြစ်ပြီး, က သီးခြား ဆောင်းပါး ၌ ဆွေးနွေး ထားသည်, ယခု ငါတို့ အ ဆီ အသုံးပြုမှု ကို စဉ်း စား ပါ လိမ့် မယ်။
မိန်းမ တိုင်း သည် ဆံပင်ကို ဂရုစိုက် ရာ၌ ဆီ အမျိုးမျိုး ကို အသုံးပြု ကြသည်။ အ ဘယ် ကြောင့် သူတို့ အသုံးပြုမှု နှင့် အတူ အလွှာ ထွက် သယ်ဆောင် သည် မဟုတ် လော ဆံပင်ကို ဂရုစိုက် ပါ၊ သူတို့ကို အာဟာရ ဖြ ည့်ပေးပါ။
အိမ်သုံး ဆီ မွှေး များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မှာ ဦး ရေ ပြား၊ ဆံပင် ကောက် ကောက် များ၊ ပြင်ဆင်ထား သည့် ဖွဲ့စည်းမှု ကို အသုံးချပြီး ကြိုး မျှင် များ ပေါ်တွင် သန့် ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု အားလုံး မျှော် လင့် ချက်များ ထက် ကျော်လွန်။ ဆံပင် ကောက် ကောက်, ချောမွေ့ တောက်ပ စီးဆင်း ဖြစ်လာသည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၏ ရလဒ် အလှပြင်ဆိုင် မှ ယုတ် ညံ့ သည် မဟုတ်။ အိမ်တွင် တစ်ကြိမ် ပြုလုပ် ပြီးနောက် သင် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်လုပ် ပါ လိမ့် မည်။
ဆံပင် ၏ Самостоятельная အလွှာ ပြုလုပ်ခြင်း အတော်လေး ရိုး ရှင်း ပါသည်။ ၎င်းသည် အထူး ကျွမ်းကျင်မှု သို့မဟုတ် ကိရိယာများ မ လိုအပ် ပါ။
စဉ်း စား ပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖျော်ဖြေ များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း:
ဦး စွာ ဦး ပြား ကို ငွေ့ သွင်း ရန် လိုအပ်သည်။ အ ပေါက် အားလုံး ဖွ င့်ရန် သင်၏ ခေါင်းကို အပူ ပု ဝါ နှင့် 3-5 မိနစ် ပတ် ထားပါ။ 2–5 ကြိမ် ပြန်လုပ် ပါ။
အ ရော အ နှော ကို ရေ ရေချိုးပြီး အနည်းငယ် အပူ ပေးပါ။ အနည်းငယ် အေး အောင် ထားပါ။
ခွဲ ရန် ရွေးချယ် ပါ၊ ထို့နောက် တစ်ဖက် စီ တွင် ဆီကို ညင် ညင် သာ သာ လိမ်း ပေးခြင်း ကြိုး များကို ခွဲ ပေးပါ။
ဆံပင် အမြစ် ကို ထိုးဖောက် နိုင်ပြီး ထုတ်ကုန် ကို ပိုမို စုပ် ယူ နိုင်အောင် သင်၏ ဦး ရေ ပေးပါ။
ရေ နံ သင့် တယ် ၁.၂ — ၂ နာရီ ခန့် မတ် တပ် ရပ် ပါ၊ တစ်ညတည်း ထား နိုင်သည်။
နောက်ဆုံး အဆင့် တွင် ဆေး ကို သင် ပုံမှန် ခေါင်း လျှော် ရည် ဖြင့် ဆေး ကြော ပါ။
နောက် တဖန် သင်၏ ဆံပင် သုတ် ခြင်း, ဆံပင် ကောက် ကောက် ခြောက်သွေ့ မှုတ်။
မင်း မြင်နိုင် တဲ့ အတိုင်း အဆီများ ကိုအသုံးပြုပြီး အိမ် Ламинирование များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မှာ အားလုံး ရှုပ်ထွေး မဟုတ်ပါဘူး။
ဗာ ဒံ ဆီ သည် စို ထိုင်း မှု နှင့် အဟာရ ထုတ်ကုန် များ ပထမ နေရာတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အ စိတ် စိတ် အမြွှာ မြွှာ ကွဲပြားခြင်း၊ ဒီ ဆေး ဟာ နွေရာသီမှာ အ သင့် တော် ဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဆံပင် အလွန် ခြောက်သွေ့ သောအခါ ခရမ်း လွန် ရောင်ခြည်၊ ဖုန် နှင့် ဓာတ်ငွေ့ များ နှင့် ထိတွေ့ နိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော မျက်နှာဖုံး များအတွက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ် ဇွန်း၊ အ ရွက် စေ့၊ ရေ ဇွန်း သုံး ဇွန်း ကို ရောနှော ပါ။ ပြီးနောက် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ညွှန်ကြားချက် များကို လိုက်နာ, ဆံပင် လျှောက်ထား ပါ။
Ши ထောပတ် သို့မဟုတ် ши ထောပတ် ထို့အပြင် မည် သည့် အလှအပ တစ်ခု မရှိမဖြစ် လက်ထောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင် အပါအ ၀ င်တစ်ကိုယ်လုံး ကို ဂရုစိုက် ရန် သင့် တော် သည်။ ဆံပင် သည် နူးညံ့။ စို စွတ် သည်၊ ဆီ သည် အကာအကွယ်၊
ဤ နည်း အား ဖြင့် အလွှာ များကို ရောစပ် ပါ။
ши — 30 мл
မ သန့် စင် သော သံလွင် ဆီ — 15 мл,
သင် အကြိုက်ဆုံး ထုတ် လွှ င့်မှု ၏ တစ်စက် နှစ် ချောင်း၊
ဗီတာမင် အီး ၁၀ мл
Масло ши သည် မိုက် ခ ရို ဝေ့ ဖ် မီးဖို တွင် အရည် သင့် ပြီး ၎င်းကို မု န့်ချို်သို့ ပို့ သင့် သည်။ ထိုအခါ ကျန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကို ထည့် သွင်း, ကောင်းစွာ ရော မွှေ ပါ။ အဆိုပါ အလွှာ ဖွဲ့စည်းမှု အသုံးပြုရန် အ ဆင် သင့် ပါပဲ။
ခြောက်သွေ့ ခြင်း၊ ဆံပင် ကောက် ကောက် ပျက်စီးခြင်း တို့ကို ကာကွယ်နိုင်သော အကောင်းဆုံး ဆေး ဖြစ်သည်။
အလွှာ ဖုံး ကို ပြင်ဆင်ရန် အောက်ပါ ဆီ များကို ယူ ပါ။
30 мл ကိုကိုး
10 мл စ ပျစ် သီး အမျိုး အ နွယ်
ပင်လယ် облепиха ၏ 15 мл။
ကျေးဇူးပြုပြီး သတိပြုပါ ကိုကိုး ထောပတ် ဟာ များသော အား ဖြင့် အ စိုင် အခဲ ဖြစ်တာ ကြောင့် ပထမဆုံး ထဲကို အရည် ပျော် သွားတယ်။
သင်းအုပ်ဆရာ ဆံပင် အတွက် အလွန် အသုံးဝင် သည်: ဆံပင် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာ ခြင်း၊ အ စို ​​ဓာတ် ထိန်း ပေးခြင်း၊
ဤ ထုတ်ကုန် နှင့် အတူ အလွှာ ထွက် သယ်ဆောင် ရန်, 15 မီလီမီတာ ထောပတ်သီး, သင်းအုပ်ဆရာ, သံလွင် ဆီ, ပျားရည် 10 мл, ဗီတာမင် အေ ၏ 3-5 3-5 ရောနှော ဖို့ လုံလောက်တဲ့, မျက်နှာဖုံး အ ဆင် သင့် သည်အထိ။
ဒါ့အပြင် ဒီ ဆေးတစ်လက် ၎င်းသည် ဆံပင်ကို ပြန်လည် ပြုပြင် ပေးခြင်း၊
အလွှာ ကို ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်ဆင်ရန်၊
30 мл အုန်းသီး
လာ ဗင်ဒါ အဆီများ 3,
ရေ၏ 45 мл။
ကျနော်တို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံး ရောနှော, ရေ ရေချိုး ထဲမှာ သူတို့ကို предварительный нагрев။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နည်းနည်း အကြံပေးချက်များ ကို လိုက် လျှောက်, သင် လုပ်နိုင်ပါတယ် လွယ်တယ် အလှပြင်ဆိုင် ထက် ပိုမို ဆိုး ရွား သည့် ရလဒ် တစ်ခု ဆံပင်ကို ညှပ် ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ် ကို ဒီလို မျက်နှာဖုံးများ နဲ့ စောင် ပါ တစ်ပတ်လျှင် 1-2 ကြိမ်။
မျက်နှာဖုံး များအတွက် သဘာဝ အဆီများ ကို အသုံးပြု ပါ၊
ရန်ပုံငွေများ ကို အကောင်းဆုံး ထိုးဖောက် နိုင်ရန် သင်၏ ဦး ခေါင်းကို တတ်နိုင်သမျှ နွေး ရန် လိုအပ်သည်။
သတိထားပါ အကယ်၍ သင် က ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နည်းများ ဖြင့် အလွှာ ပါး ကို စိတ်ဝင်စား ပါ က ဆောင်းပါးများကို ဖတ် ပါ။
ဥ များသည် သင့် ဆံပင် ပုံစံ အတွက် အလွန် အသုံးဝင်သော ထူးခြား သည့် သဘာဝ ထုတ်ကုန် ဖြစ်သည်။ ပရို တိန်း သည် ဆံပင် ကောက် ကောက် များအတွက် တည်ဆောက်မှု ဖြစ်စေသော အရာများ ပါ ၀ င်သည်။ အဝါရောင် သည် အ ဆီ ပြည့် သော အက်ဆစ် များ ကြွယ် ၀ ခြင်း၊ ဆံပင် ရိုး တံ ကို အာဟာရ ဖြ ည့်ပေးသည်။
ကြက်ဥ အခြေခံသော လမိုင်း မျက်နှာဖုံးများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် သင်သည် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို ရရှိ လိမ့် မည်။ ကြိုး မျှင် များကို ပါး လွှာ စေရန်၊ ဗီတာမင် ဘီ နှင့် ချောမွေ့ စေရန်၊
ကြက်ဥ မျက်နှာဖုံး သည် လူတိုင်းအတွက် သင့် တော် ပြီး နှင့် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူ သည်။
ခြောက်သွေ့ သော မုန် ညင်း အ မှု်ကို ကြက်ဥ အ ကာ နှင့် ရောစပ် кремовый ကိုက်ညီမှု ရှိအောင် ရော မွှေ ပါ။
ကြက်ဥ ကို အရင် ချိုး ပါ၊ လှုပ် ပါ။
မျက်နှာဖုံး ကို ကြိုး မျှင် များ နှင့် ပွတ် သပ် ပြီး လေး ဖြင့် ဖြီး ဖြန်း ပါ။
ရေချိုး ဆပ်ပြာ တစ်ချောင်း ဖြင့် သင်၏ ဆံပင်ကို ခြုံ ထားပါ။
ဒီ မျက်နှာဖုံး ကို မိနစ် ၄၀ မှ ၆၀ အတွင်း ထားပါ၊ ပြီးလျှင် ရေ သန့် ဖြင့် ဆေး ပါ။
သိကောင်းစရာ ဒီ ဖြစ်ရပ် မှာ၊ ခေါင်း လျှော် ရည် ကို မ သုံး တာ က ပိုကောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကြက်ဥ ထဲမှာပါတဲ့ ပရို တင်း တွေဟာ အမျှင် တွေရဲ့ မျက်နှာပြင် မှာ အကာအကွယ် ရုပ်ရှင် ဖန်တီး သင့် တယ်။ ဒီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဆံပင် ကောက် ကောက် ချောမွေ့ နေကြသည်။
အ ချဉ် — နို့ ထွက် ပစ္စည်းများ အာဟာရ အတွက်သာမက အလှကုန် အမျိုးမျိုး အတွက်လည်း အလွန် အသုံးဝင် သည်။ Кефир မျက်နှာဖုံးများ ဆံပင် ၏ မျက်နှာပြင် ပေါ်တွင် အကာအကွယ် အလွှာ တစ်ခုကို ဖန်တီး ပါ၊ ကွဲ လွယ်။ ခြောက်သွေ့။ အားနည်း သော ကြိုး မျှင် များကို ဖယ်ရှား ပါ။
သို့သော် кефир မျက်နှာဖုံးများ တ ဦး တည်း ရှိသည် အားနည်းချက် — သူတို့ က ဆံပင် ကောက် ကောက် ဆေး တယ်။ ဒါ ကြောင့် သူတို့ က ဆေး ဆိုးတဲ့ ဆံပင် ပေါ်မှာ အသုံးပြုဖို့ အကြံပြု ထားတာ မရှိပါဘူး။
က ဖီး မျက်နှာဖုံး ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု သည် ကာကွယ်ခြင်း၊ ဆံပင် ကောက် ကောက်၊ အာဟာရ ချို့တဲ့ မှုကို ကုသရန်၊ မှို ဖြစ်ပွားခြင်း မှကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ламинация အကြောင်းကို 3-4 ရက်သတ္တပတ် ကြာရှည် ပါ လိမ့် မယ်။ ထို့အပြင် မျက်နှာဖုံး သည် စျေး သိပ်မ ကြီးသော၊ လူတိုင်းအတွက် လက်လှမ်း မီ သည်။
ထိုကဲ့သို့သော မျက်နှာဖုံး အတွက် သင် လိုအပ်သည် မှာ —
ပျားရည် တစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
မ သန့် စင် သော သံလွင် ဆီ ၂-၃ ဇွန်း။
кефир ပမာဏသည် ဆံပင် အရှည် ပေါ်တွင် မူတည် သည်။ နွေး သော кефир ကို အခြား အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ရောပြီး အရာရာကို နှိုက် နှိုက် ချွတ် ချွတ် ရော မွှေ ပါ။ လျှောက် လွှာ တင် ပြီးနောက် ချက်ချင်း ထုပ် ကို တင် ပါ၊ မိနစ် ၄၀ မှ ၆၀ အထိ စောင့် ပါ။ ခေါင်း လျှော် ရည် ဖြင့် အရာအားလုံးကို ဆေး ကြော ပါ။
သိကောင်းစရာ кефир မျက်နှာဖုံး သည် အတော်အတန် အရည် ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကို မောင်းနှင်မှု ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း က အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
ဒီ စာရွက် ခြောက်သွေ့ သော ကြိုး မျှင် ပိုင်ရှင်များ အတွက် သင့် တော် သည်။ အ ဆီပြန် သော ဆံပင် တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု သည် မျှော် လင့် ထား မဖြစ်နိုင်ပါ။ အ ဆီ နှင့် အလွန် အ ကံ ျ ရလဒ်ကို ဦး တည် သွား စေ ခြင်း ငှါ, သော့ ခ လောက် ချော ကျိ ပုံ ပေါ် လိမ့် မယ်။
မျက်နှာဖုံး Майонез ကို အိမ်တွင် အသုံးပြု သည် သဘာဝ ကျသော၊ ကျန်းမာ သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ламинирование ပြီးနောက်, သင် အကြွင်းမဲ့အာဏာ ဓါတ် ကို ထိန်းသိမ်း, пряди ၏ အာဟာရ, သူတို့ရဲ့ ဗီတာမင် E ကို နှင့် အတူ ပြည့် နှက်, ချော တားဆီး လိမ့် မယ်။
သံလွင် ဆီ နှင့် лопух အဆီများ,
ချက်ပြုတ် ခြင်း နည်းပညာ သည် သာမန် အိမ် майонез နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။ မျက်နှာဖုံး အပါအ ၀ င်ဆံပင် များ၌ မျက်နှာဖုံး ကို အသုံးချ၍ သင်၏ ဦး ခေါင်းကို 1.5-2 နာရီ ခန့် ထားပါ။ ထို့နောက် ပုံမှန် ဆံပင် ဖြင့် ဆံပင်ကို လျှော် ပါ။
ဆံပင်ကို လှီး ဖြတ် ခြင်းသည် သင်၏ ဆံပင်ကို လှပ တောက်ပ စေပြီး ဂရုစိုက် စေသည်။ ဆံပင် အ လှ ပြုပြင် သူ ထံ သွားပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပေး ချေ ရန် လိုအပ် ပါ။ အထူး ကျွမ်းကျင်မှု၊ အိမ်တွင် ကုန်ကျစရိတ် များ မရှိဘဲ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆံပင်ကို ပြန်လည် ပြုပြင်ရန် မျက်နှာဖုံး။
ဆံပင်ကျွတ် ခြင်း အပေါ် ခံတွင်း။
ဂျယ် လတ် ကင်း မျက်နှာဖုံးများ နှင့် ဆံပင်ကို ပြုလုပ်ထားသော ဆံပင် တွင် အထူး ပြင်ဆင်ထားသော အ အ နှော ပါဝင်သည်။ သူမသည် прядь တစ်ခုချင်း စီ ကို အကာအကွယ် ပေး သည့် ရုပ်ရှင် နှင့် ဖုံး အုပ် ထားသည်။
ရလဒ် အ နေ ဖြင့် ဆံပင် ကောက် ကောက် များသည် လူ ရှိသော အသွင်အပြင် ကို သာ ရရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်ပ အချက်များ နှင့် ခရမ်း လွန် ရောင်ခြည် မှ ကာကွယ် ပေး လိမ့် မည်။
ဤသို့သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သည် —
ပါး လွှာ ပြီး အားနည်းနေ သော ကြိုး မျှင်၊
အ ပင် ပေါက်။ ကြီး ပွား သည် မဟုတ်၊
ပါ မစ်၊ အရည်အသွေး ညံ့ သော သုတ် ဆေးများ သို့မဟုတ် ဆံပင် အ ခံ စက်များ ပျက်စီးခြင်း ဆံပင် ကောက် ကောက်။
အိမ်တွင် ဆံပင်ကို အလွှာ ပါး ဖြင့် လိမ်း ပေးခြင်း သည် သူတို့၏ အရည်အသွေးကို တိုးတက် စေသည်။ ဆံပင် ပုံစံတွေ ကို တ ည့်တ ည့ ချောမွေ့ အောင်လုပ် ဟာ တ ည့်တ ည့်ည့်နေပြီ။ ဒီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အားနည်းချက်များ ထက် အများကြီး ပို အားသာချက်များ ရှိပါတယ်။
ဆံပင် ကောက် ကောက် များ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, အာဟာရ နှင့် ကာကွယ် စောင့် ရှောက် ရေး။
သဘာဝ တောက်ပ မှု၊ တောက်ပ မှု နှင့် ချော ချောမွေ့ မွေ့ ပေါ်လာသည်။
အဆိုပါ အုပ်စုခွဲ ကြီး စွန်း တံဆိပ် ခတ် နေကြသည်။
кудрявый ဆံပင် ချောမွေ့ သည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် လျှောက် လွှာ တင်ပြီး သည့် နောက်တွင် ၃၄ ပတ် မှ ပတ် အထိ ကြာ သည်။
အလွှာ အလွှာ ၏ ပြင်ဆင်မှု အတွက် သဘာဝ ပါဝင်ပစ္စည်းများ သာ အသုံးပြု သည်။
သိသိသာသာ ငွေ စု — ၎င်းသည် အလှပြင်ဆိုင် များထက် ဈေး ချို သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် နှင့် နို့ တိုက် နေစဉ် အကြွင်းမဲ့အာဏာ လုံခြုံမှု။
အိမ်တွင်း အလွှာ ၏ ဆိုးကျိုးများ:
ရရှိသော ရလဒ် သည် ဆံပင် ၏ တည်ဆောက် ပုံ နှင့် အကြံပြုချက်များ လိုက်နာ ခြင်း အပေါ် များစွာ မူတည် သည်။
အစိတ်အပိုင်းများ ကို ဖုံးကွယ် ရန် မ တ ည့်တုံ့ပြန်မှု ၏ အန္တရာယ်။
ဓါတ် မ တ ည့်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဘုရား ကျောင်းများ နှင့် နား малый ရိ ယာ အနည်းငယ်ကို အသုံးပြု၍ သင့် သည်။ အကယ်၍ နီ ခြင်း နှင့် မီးလောင်ခြင်း မ ဖြစ်ပွား ပါ က သင် ဤ နည်းလမ်းကို လုံခြုံစွာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နိုင်သည်။
Ламинирование ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ် သော မည် သည့် ထုတ်ကုန် ကိုမဆို အသုံး ဆံပင်ကို ရမည်။ ဤ သည် တပ် မက် လိုချင်သော ရလဒ် ရရှိရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။
ပထမ ဦး စွာ ဆံပင် အမျိုးအစား နှင့် လိုက်ဖက် သည့် သာမန် ခေါင်း လျှော် ရည် ဖြင့် သင်၏ ဆံပင်ကို ၂ ကြိမ် လိုအပ်သည်။ ဆဲလ် များအားလုံးကို ဖယ်ရှား သင့် သည်။ ထို့နောက် ဆံပင် များကို မျက်နှာ သုတ် ပု ဝါ ဖြင့် လိမ်း ပေးပါ။
ဆံပင်ကို ညှပ် ရန်အတွက် မျက်နှာဖုံး ကို အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကိုင် ခြင်း အတွက် စည်း မျဉ်း များသည် သင် အသုံးပြု မည့် သတ်သတ်မှတ်မှတ် သည်။ ဤ အဆင့် ဆင့် လုပ်ဆောင်မှုများ မှာ အဖြစ် များသည်။
ဆံပင် အရှည် တစ် လျှောက်လုံး တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထား သည့် ဖွဲ့စည်းမှု ကို အသုံးပြု သည် — Базальная зона မှစတင်ပြီး အကြံဥာဏ်များ ဖြင့် အဆုံးသတ် သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရန်ပုံငွေများ ဖြ န့်ဖြူး ခြင်း အတွက် သင် ဖြီး ကို သုံး နိုင်သည်။
ဦး ခေါင်းပေါ် တွင် အထူး ရေချိုးခန်း အ ဖုံး ကို ဝတ်ဆင် သင့် သည်။ မ ရ ရှိလျှင်, အစား ပုံမှန်အစည်းအဝေး တွယ် ကပ် ရုပ်ရှင် ကို သုံး ပါ။ ပျော့ ပျောင်း သော သုတ်ပဝါ မှ တာ ဗန်း သည် ထိပ် ပေါ်တွင် အနာ ကျ နေသည်။ လုပ်ငန်း တာဝန် က ပူ နွေး စေသော ပိုး အိမ်ကို ဖန်တီး ရန် ဖြစ်သည်။
ထိတွေ့ မှု အချိန်သည် မိနစ် ၃၀ မှ ၁ နာရီအထိ ရှိသည်။
ခေါင်း လျှော် ရည် ဖြင့် အေးဆေး ထည့် သည့် ခေါင်း လျှော် ဖြင့် ဆေး ကြော ပါ။
ရိုးရှင်းသော သဘာဝ ဒြပ် ပေါင်းများ ကို အသုံးပြု၍ ဆံပင် အတွက် အိမ်သုံး အလွှာ ဆံပင် ကောက် ကောက် များကို ကုသရန် တိုးတက်ရန် သူများအတွက် ဖြစ်သည်။ ဒီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကို ဖျော်ဖြေ တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ် မှုတွေ က သူ့ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို အတည်ပြု ပါတယ်။
အိမ် လုပ် ချက်ပြုတ်နည်းများ ၏ မ ငြင်း နိုင် သည့် အားသာချက် မှာ ၎င်းတို့သည် ပြင်ဆင်ရန် လွယ်ကူ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အားလုံး အစိတ်အပိုင်းများ ကို အသုံးဝင်သော နှင့် စျေး သိပ်မ ကြီး တဲ့ ဖြစ်ကြသည်။
အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ် ထားသော безжелатиновая ламинация မျက်နှာဖုံး များအတွက် ရွေးချယ်စရာများ စွာ ကို ကြည့် ပါ ဘယ်ဟာကို သင် ရွေးချယ် မလဲ
ပျား ထုတ်ကုန် များ နှင့် မ တ ည့်သော သူများအတွက် ပျားရည် မျက်နှာဖုံး သည် တော် ပါသည်။
အလွှာ ကို ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်ဆင်ရန် အတွက် သင် လိုအပ်သည် မှာ —
၁ Чайная ложка အရည် ပျားရည်
1 ကြက်ဥ အ နှစ်
1 столовая ложка အ ရ သိရသည်။ ဌ ဆီ (၃) မျိုး မ ဆို၊ နေ ကြာ၊ သံလွင်၊
ဗီတာမင် အေ၊ ဘီ၊ အီး ၂-၃ ကျန်တယ်
အားလုံး ပါဝင်ပစ္စည်းများ ရော မွှေ နှင့် ရေနွေး ငွေ့ ရေချိုး အနည်းငယ် နွေး။ အပူချိန် အရေပြား များအတွက် အဆင်ပြေ ဖြစ် သင့် သည်။
ဆံပင်ကို ဆေး ကြော ရန် မျက်နှာဖုံး ကို အသုံးပြု သည်။ ၎င်းသည် အသက် ၃၀ မှ ၄၀ မိနစ် ခန့် ကြာ မြင့် သည့် ရေချိုး နှင့် လက် သုတ် ပု ဝါ ရှိသည်။ ထို့နောက် ခေါင်း လျှော် ရည် နှင့် ဆေး ကြော ပြီးလျှင်။ ထိုကဲ့သို့သော ကိရိယာ တစ်ခု အသုံးပြုခြင်း က ဆံပင် ကောက် ကောက်၊ တောက်ပ။ ကျန်းမာ စေ လိမ့် မည်။
Кефир သည် Ламинирование အ ရော အ နှော ပါဝင်သော ကြောင့် ဆံ သား မျက်နှာပြင် ပေါ်တွင် အကာအကွယ် အလွှာ တစ်ခုကို ပေးပြီး ချောမွေ့ စွာ၊ ကောင်းမွန်စွာ သပ် ရပ်။ တောက်ပ စေသည်။ ဒီ မျက်နှာဖုံး နဲ့အတူ ခြောက်သွေ့ ခြင်း နှင့် ပိန် ပိန် ခြင်းကို ဖယ်ရှား ပစ် နိုင်ပါတယ်။ အလွှာ ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု ခန့် 3-4 ပတ် ကြာရှည် ပါ လိမ့် မယ်။
Кефир မှာ အနုတ် ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိရ သင့် တယ်။ ဆေး သုတ် တယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤ ကိရိယာ သည် ရောင်စုံ ဆံပင် ကောက် ကောက် များကို အသုံး မပြု သင့် ပါ။
ချက်ပြုတ် ရန်အတွက် သင် လိုအပ်သည် —
80 мл အ နိ မ့်အ ဆီ кефир,
15 мл Castor ဆီ,
40 ဂရမ် майонез
кефир မ သုံး မီ အနည်းငယ် နွေး ရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို ကျန် အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ပေါင်းပြီး ရောနှော ပေါင်းစပ် မှုကို တစ်သားတည်း ဖြစ်သော အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖြစ်စေသည်။
ဆံပင်ကို မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ မိနစ်အထိ အသုံးပြု သည်။ ဤ အချိန်တွင် ဆံပင် နှင့် ပ ဝါ အောက်တွင် ဖယ်ရှား သင့် သည်။ ခေါင်း လျှော် ရည် နှင့် ဆေး ကြော ပြီးလျှင်
кефир မျက်နှာဖုံး က အရမ်း ပါး နေ လား စိတ်ဓာတ် မ ကျ ပါ နဲ့။ ဤ ကိစ္စတွင် ကား ကို မောင်းနှင် ခြင်း ဖြင့် အသုံးပြု သင့် သည်။
ကြက်ဥ တစ်လုံး ပါ သော အညစ်အကြေး သည် မည် သည့် မ ဆို အတွက် သင့် တော် ပါသည်။ ပရို တိန်း သည် ဆံပင် ကောက် ကောက် များကို အကာအကွယ် အကာအကွယ် ဖြင့် ဖုံး အုပ် ပြီး အဝါရောင် သည် ဆံပင် ရိုး ကို ဖြ ည့်ပေးပြီး жирные кислоты များ ဖြင့် ပြည့် နှက် စေ လိမ့် မည်။ ဒီ ထုတ်ကုန် ကိုအသုံးပြုပြီး နောက် ဆံပင် ချောမွေ့ ချောမွေ့ ဖြစ်လာသည်။
အ ရော အ နှော ကို ပြင်ဆင်ရန် သင် လိုအပ်သည် —
ကြက်ဥ ကို ပုတ် ပြီး မုန် ညင်း နဲ့ရော ထားပါ။ ရှေ့နောက် ညီညွတ်မှု စတိုးဆိုင် ချဉ် သော မု န့်နှင့် တူ သင့် ပါတယ်။
ဦး စွာ ဦး ရေ ပြား ထဲသို့ ဖွဲ့စည်းမှု ကို ပွတ် သပ် ပြီးနောက် အရှည် တစ်ခုလုံးကို ဖြ န့်ဝေ ပါ။ ယူနီဖောင်း အ ပ လီ ကေး ရှင်း အ ဘို့, က гребешок အသုံးပြုရန် အကြံပြု သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို မြှ င့်တင်ရန် သင်၏ ဦး ခေါင်းကို ပု ဝါ နှင့် ပတ်။ မိနစ် ၄၀ မှ ၆၀ အထိ ခံ နိုင်သည်။
မျက်နှာဖုံး ကို ရေ နှင့် သာ ဆေး ကြော ပါ။ ခေါင်း လျှော် ရည် သည် အကာအကွယ် ပေး သည့် ရုပ်ရှင် ကို ဆေး ကြော နိုင်သည်။
အုန်းသီး နို့ ကို ဆံပင် ကောက် ကောက် အတွက် အာဖရိက မျက်နှာဖုံးတွင် အခြေခံ အဖြစ် ယူ သည်။ ဒီ အစိတ်အပိုင်း အသစ်တစ်ခု ကို အသစ်ပြန်လည် နှင့် အ စို ​​ဓာတ် ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ချက်ပြုတ်နည်း နှစ်ခုကို သုံးသပ် ကြည့် ပါ။
ထုတ်ကုန် များကို ၎င်းတို့ အတွက် ပထမဆုံး ပြင်ဆင်ရန် သင် လိုအပ်သည် —
များစွာသော မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အဆီများ (လက်ဖက် ပင်၊ ယူ ကလစ် ပင် သို့မဟုတ် oa) ၂-၃ ကျဆင်း သည်။
ဦး စွာ အုန်းသီး ခုတ် ရန်၊ ၎င်း တွင် ပါ သော အရာများကို ကြွေ အင် တုံ ထဲသို့ လောင်း ကာ ထား၍ ထား ရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်ဆုံး အလွှာ ထူ လာ သောအခါ ဇွန်း ဖြင့် ဖယ် ကျန်ရှိနေသော နို့ လိုအပ်သော အဆီများ နှင့် သံပုရာ များကို ထည့် ပါ။
အရာအားလုံးကို နှိုက် နှိုက် ချွတ် ချွတ် နှင့် ထူ သည်အထိ ၏။ ထို့နောက် မျက်နှာဖုံး ကို အ ပြည့် ဖြ ည့ ်ပြီး ဦး ထုပ် အောက်တွင် နာရီ ကြာ စိမ် ပါ။ ထုတ်ကုန် ကို ရေ ပူ ဖြင့် သာ ဆေး ကြော ပါ။
အခြား ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုဖြစ်သော အာဖရိက ၏ ကြမ်းခင်း မျက်နှာပြင် ကို လိုအပ်သည် မှာ —
50 мл အုန်းသီး နို့
20 мл သံလွင် ဆီ,
အာလူး ဓာတ် ၏ 20 ဂရမ်။
မြေ ပြင် သံပုရာ ဓာတ် နှင့် အတူ ပေါင်းစပ် ရ မည်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော ပြီ နောက် ဟင်း ထဲတွင် အ ရော အ နှော ကို တစ်သားတည်း အခြေအနေသို့ ယူဆောင် လာပါ။ ထောပတ်၊ နို့ ကို ထည့် ပြီး အပူ နည်း အောင်လုပ် ပါ။ ဒါဟာ အနည်းငယ် နွေး ဖို့, ဆူ ပွက် စေ ခြင်း ငှါ ဆောင်ခဲ့ ခြင်း နှိုးဆော်ခြင်း မရှိဘဲ လိုအပ် ပေသည်။
ထူ ပြီးနောက် က ဖွဲ့စည်းမှု အအေး ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် ပြီးပြီ မျက်နှာဖုံး သင့် ဆံပင်ကို လျှောက်ထား ပါ။ ၁.၅ နာရီ ခန့် ထားပါ၊ ထို့နောက် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ သော ခေါင်း လျှော် ရည် နှင့် ဆေး ပါ။
ဒီ မျက်နှာဖုံး က ဆံပင်ကို စို ပြည် စေပြီး ဖြော င့်စေတယ်။ ၎င်းသည် ကျန်းမာရေး ကို ချောမွေ့ စေပြီး တောက်ပ စေသည်။
ဆံပင် ကောက် ကောက် များကို အိန္ဒိယ စာ နည်း ဖြင့် သုံးရန် သင် လိုအပ်သည် —
2 столовые ложки။ ဌ အရည် ပျားရည်
1 မှ ည့်သော ငှက် ပျော
1-2 столовые ложки။ ဌ အုန်းနို့ သို့မဟုတ် ထောပတ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို Blender ဖြင့် scroll လုပ်ပြီး ဆန် ခါ တ လျှောက် သုတ် လိမ်း ရမည်။ အ ရော အ နှော သည် အလွန် အရည် မ ဖြစ် သင့် ပါ။
မျက်နှာဖုံး ကို ခြောက်သွေ့ သော ဆံပင် ကောက် ကောက် များတွင် အသုံးပြု သည်။ ဦး ထုပ် နှင့် မျက်နှာ သုတ်ပဝါ အောက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အသက် ၄၅ မိနစ် ဖြစ်သည်။ ပူ နွေး သော ရေ နှင့် အော်ဂဲနစ် ခေါင်း လျှော် ရည် ဖြင့် ဆေး ကြော ပါ။
ဆံပင် နှင့် အဆီများ ကို အလွှာ များ ဖြင့် လိမ်းခြင်း က ဆံပင်ကို ကျန်းမာ စေသည်။ ပိုး မွှား ဒြပ် ပေါင်းများ ကို ပြင်ဆင်ရန် အတွက် ဗာ ဒံ သီး၊ ရှီ၊ ကိုကိုး၊
ရေ နံ အလွှာ တွင် ဦး ရေ ပြား နှင့် ကြိုး မျှင် များကို စေ့စေ့စပ်စပ် ပြင်ဆင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို ပြီးနောက် သင် သာ အ ရော အ နှော ကို စတင် လျှောက်ထား နိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက် များ၏ အစီအစဉ် သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် —
ဦး စွာ ဦး ရေ ပြား ကို ရေနွေး ငွေ့ ပု ဝါ ဖြင့် အပူ ပေး၍ ၅-၁၅ မိနစ်။ ဤ သည် အတွင်းပိုင်း ဖွဲ့စည်းမှု ၏ ပိုကောင်း တဲ့ ထိုးဖောက်မှု ပေး အ ပေါက် င့်လှစ် ပါ လိမ့် မယ်။
ဆီ အ ရော အ နှော ကို ရေနွေး ငွေ့ ဖြင့် ရေချိုး။ အနည်းငယ် အအေး ခံ ပါ။
ရေ နံ ကို ယခင်က ခွဲ ထားသော ကြိုး များသို့ ဂရုတစိုက် အသုံးပြု သည်။ ပို ကောင်းသော စုပ် ယူ နိုင်အောင် ပွတ် တိုက် ခြင်း ဖြင့် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
ထုတ်ကုန် ကို ၂ နာရီ ခန့် ကြာ သည် (နေ့ခင်း တွင် ဦး ထုပ် အောက်တွင် ထား နိုင်သည်)။
၎င်းသည် သာမန် ခေါင်း လျှော် ရည် ဖြင့် လ စံ စေး ဖြင့် ဆေး ကြော သည် (ဆံပင်ကို ၂ ကြိမ် သုတ် အကြံပြု လို သည်)။
အဝတ် လျှော် ပြီးနောက် ဆံပင် ကောက် ကောက် ခြောက်သွေ့ သော (အပူချိန် နိ မ့်သော) ဖြင့် ဖြစ်စေ သဘာဝကျကျ ခြောက်သွေ့ စေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ယခင်က အိမ်၌ အလွှာ မ လုပ်ခဲ့ ဖူး ပါ က အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသား သူများ နှင့် ဦး စွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး သင့် သည်၊ သူတို့၏ ဓာတ်ပုံများကို ကြည့် ပါ။ ဒါ ကြောင့် သင်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ တစ်ခုလုံးကို ပြည့် ပြည့် စုံစုံ လေ့လာပြီး ရလဒ်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တပ် မက် လိုချင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှု ရရှိရန် အောက်ပါ အကြံပြုချက်များ ကို အကြံပြု ပါသည်။
ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာဖုံး မ သုံး မီ သင် အမြဲတမ်း ဓာတ် မ တည် စစ်ဆေးမှု ကို ပြုလုပ် သင့် သည်။
သင်၏ ဆံပင်ကို ဆေး ဆိုး ламинирование ဒြပ် ပေါင်းများ မ စတင် မှီ ၂ ပတ် အ လို တွင် ဆေး ကြော သင့် သည်။
ထိတွေ့ မှု အချိန် နှင့် ချက်ပြုတ်နည်းများ တွင် ဖော်ပြထားသော အချိုးအစား ကို ကြည့် ဖို့ သေချာ စေ ပါ။
ဒါဟာ သန့် စင် ပြီး သန့် စင် ထားသော အဆီများ ကို ခြင်း ငှါ သာ။ ကောင်း၏။ သူတို့မှာ အာဟာရ တွေ များတယ်။
ဆံပင်ရှည် နှင့် အ ထူ အတွက် အစိတ်အပိုင်း အားလုံး၏ ပမာဏသည် ၃ ဆ တိုးပွား သည်။
တစ်ချိန်တည်း တွင် ၁ ကြိမ်ထက် ပို သော ဆံပင် ကောက် ကောက် အသုံးပြုရန် အကြံပြု လိုပါသည်။
желатин မပါဘဲ အိမ်မှာ ဆံပင် ၏အ လွှာ သည် အလွန် ကောင်းသော ရလဒ်များကို ပေးသည်။ ဤ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သည် ခွဲ ထားသော အ ဆုံး များကို ပေးပြီး ဆံပင် ကောက် ကောက် များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ကို ပြန်လည် ပြုပြင် ပေးပြီး ၎င်းတို့ကို နှင့် တောက်ပ စေသည်။
အမျိုးမျိုးသော အိမ်သုံး မျက်နှာဖုံး များတွင် သဘာဝ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် စျေး သိပ်မ ကြီးသော ပစ္စည်းများ သာ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ကြာရှည်စွာ ရိုးရာ ဆေးပညာ တွင် အသုံးပြု ခဲ့ ဗီတာမင် များ ပြည့် နိုင်သည်။
ရလဒ် ကောင်း တစ်ခု ရ ရန်အတွက် သက်သေ ပြ ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သာ ဆံပင် ကောက် ကောက် များကို သာ အသုံးပြုရန် အကြံပြု သည်။ ဆံပင် အ လှ ပြုပြင် သူ နှင့် ဆွေးနွေး ပြီးနောက် ဆံပင်ကို အကာအကွယ် အတွက် များကို အသုံးပြုရန် ခွင့် ပြုသည်။
အိမ်တွင် ဆံပင် မ ဖြ ည့်မီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၏ ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုးများ အားလုံး နှင့် သင် ရင်းနှီး ဝင်ရန် လိုအပ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် မည် သည့် ထွက်ပေါ်လာ မည် ကို နားလည် ရန် လိုအပ်သည်။ ဆံပင် တစ်ခုချင်း စီ ကို အထူး အကာအကွယ် ပေး ဖွဲ့စည်းထားသော ဖုံး ၎င်းသည် သင့် အား ပတ်ဝန်းကျင် ၏ ဆိုးကျိုးများ မှ ပေးနိုင် သည်။ ламинирование ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်:
အထူး ဖွဲ့စည်းမှု သည် သင့် အား ဆံပင် တစ်ခု စီ ကို ရုပ်ရှင် နှင့် ဖုံး အုပ် စေသည်။
ဒီလိုမျိုး ပိုး အိမ် က ဆံပင် လေ မှုတ် ကိုသုံးပြီး ဆံပင် အ လှ ပြုပြင် တာ ကို တောင်မှ ဆံပင် ပျက်စီး အောင် မ ကြောက်ရွံ့ စေ ပါ။
Ламамин သည် ဆေးဘက် ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မဟုတ်ပါ။ ဤတွင် ဖြစ်စဉ် သည် ပြင်ပ လွှမ်းမိုးမှု အားလုံး မှ ဆံပင်ကို ကာကွယ်ရန် နှင့် ဆံပင် ကောက် ကောက် များအား ရည်ရွယ် သည်။
ရလဒ် အ နေ ဖြင့် ကွဲ သွား သည့် ဆုံး များ နှင့် လတ် ဆတ် မှု ပျောက်ကွယ်သွား ပြီး ဆံပင် သည် မြင်သာ သော အရောင် တောက်ပ မှု နှင့် идеально ုံ ချောမွေ့ လှသည်။
အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို ခိုင်မာ စေရန် အ ပို ထပ် ဆောင်း စောင့် ရှောက် မှု လိုအပ်သည်။ ဤ နည်း သည် ဆံ သား ၏ အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး ကို ကာကွယ် လိမ့် မည်။
အကယ်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် ပါ က သင်တန်း ဗီဒီယို ကို ထပ်မံ ကြည့် ရှု ခြင်း က ပို ကောင်းသည်။ လုပ်ငန်း စဉ် တစ်ခုလုံးကို အဆင့် ဆင့် ခွဲ ထားသည်။ ဆံပင် ламинирование လုပ်နည်း:
ဂျယ် လတ် တစ် ဇွန်း တစ် ဇွန်း ကို ကွန်တိန်နာ သေး တစ်ခု ထဲသို့ သွန်း လောင်း သင့် သည်။ အဲဒီမှာ ပြုတ် ရေ ဇွန်း သုံးမျိုး ထည့် သွင်း ထားသည်။ ဆံပင်ရှည် အတွက် သင်သည် သုံးဆ လောက် အ ရော အ နှော လိုအပ်သည်။ အရာအားလုံးကို ရောနှော ရန် အကြံပြု ပါသည်၊ သို့သော် သေးငယ်သော အပိုင်းအစများ သည် တစ်သားတည်း ဖြစ်တည်ခြင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသွင် သို့ မ ရောက်နိုင် လျှင် ပင်၊ သင်သည် နောက် အဆင့် သို့ ဆက်သွား နိုင်ပါသည်။ желатин သည် သဘာဝ ပါဝင် ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး ဆံပင်ကို ဆေး ကြော နိုင်သည်။
ရရှိလာတဲ့ အ ရော အ နှော ကို ခဏ တစ် ဖြုတ် အုပ် ထား ရမယ်။
ယင်း ကြောင့် желатин သည် အအေး ခံ ရန် နှင့် ရောင် ရမ်း အချိန် မရှိပါ။
ရေချိုးခန်းထဲမှာ သင် ဆံပင်ကို ဘော လ ဇံ သို့မဟုတ် မျက်နှာဖုံး ကို ဆေး ကြော ရန် လိုအပ်သည်။ နှစ် ဦး စ လုံး ရန်ပုံငွေများ လိုအပ်သော အချိန် ပမာဏ အ ဘို့ အ ခေါင်း အပေါ် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဆံပင် လုံးဝ ခြောက်သွေ့ သည်အထိ စောင့် ဆိုင်း မ နေ ပါ နှင့် — သူတို့ အနည်းငယ် စို စွတ် သော ဖြစ် သည်။
ဒီ အဆင့် ရဲ့ အ စ မှာ ၁၅ မိနစ်လောက် ကြာ သင့် တယ်။ အ ရော အ နှော ရှိ ဖု များသည် များ ပါ က ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေ ရေချိုးခန်း အတွင်းရှိ အရာအားလုံးကို အပူ ပေးပြီး တစ် သ ရရှိသည်။
ဇယ် တစ်ဝက် ဆံပင် မျက်နှာဖုံး ကို желатин ကွန်တိန်နာ တွင် ထည့် သွင်း ထားသည်။ ရန်ပုံငွေ အနည်းငယ် ရှိရန် အရေးကြီးသည်၊ သို့မဟုတ် ပါ က ထို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု သည် အလွန် အားနည်းနေ လိမ့် မည်။
အ မြစ်များ မှ အနည်းငယ် စင်တီမီတာ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာ, ဖွဲ့စည်းမှု ဆံပင် မှ လျှောက်ထား သည်။
ကုသ ထားသော ဆံပင်ကို ဦး ထုပ် တစ်လုံး နှင့် မျက်နှာ သုတ် ဝါ နှင့် ဖုံး အုပ် ထားသည်။ လာမည့် ၁၅ မိနစ်အတွင်း သင်၏ ဆံပင်ကို လေ မှုတ် စက် တစ်ချောင်း ဖြင့် နွေး ပါ။ ဆံပင် ပေါ်မှာ မိနစ် ၃၀ နေ သင့် တယ်။
ထပ်ခါတလဲလဲ ламинирование လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတွက် желатин မျက်နှာဖုံး အသုံးပြု သင့် သည်။
အရေးကြီးတယ်။ မှတ်မိ ရ မည့် အရေးကြီးသောအချက် တစ်ချက် မှာ အိမ်တွင် ламинирование ပြုလုပ် ပြီးနောက် သင်၏ ဆံပင်ကို လျှော် шампуни без сульфатов များကို သာ အသုံးပြု သင့် သည်။
သင် ဤ အချက်ကို မလိုက်နာ ပါ က အကျိုးသက်ရောက်မှု သည် စု ပြုံ။ မရပါ။ ဗွီဒီယို တခုလုံး ကို အဆင့် ဆင့် လိုက် လုပ်နည်းကို သင် ကြည့် နိုင်သည်။
ламинирование желатином ၏ လူကြိုက်များ ငြင်းပယ် မရနိုင်ပါ။ သို့သော် ဆံပင်ကို ကာကွယ်ရန် နှင့် ဖြော င့်ရန်အတွက် အခြားနည်းလမ်း များ ရှိသည်။
ဤနေရာတွင် ရောစပ် ခြင်း ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း မှာ အုန်းသီး ဖြစ်သည်။ ၏ ဖော်မြူလာ တွင် အောက်ပါ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်:
(အရည် အခြေအနေတွင်) အုန်းနို့ ၏ ဇွန်း တစ်ဝက် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း ဇွန်း ခု၊ သို့သော် အ ထူ အ ရော အ နှော များ ဖြင့် t
ထုံး တစ်ဝက် ထုံး သို့မဟုတ် ပုံမှန် သံပုရာ ဖျော်ရည်၊
အာလူး ဓာတ် ပါဝင်မှု ၁.၅-၂ ဇွန်း နှင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် ခန့်။
အိမ်တွင် မည် သည့် မျက်နှာဖုံး စာရွက် မျှ ကဲ့သို့ မှာ မ ခက်ခဲ ပါ။ ကွဲပြား ခြားနား သော အ ရော အ နှော နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း ပြင်ဆင် လျက်ရှိသည်။ သံပုရာ ဖျော်ရည် နှင့် အတူ ဓာတ် နှင့် အုန်းနို့ နှင့် သံလွင် ဆီ တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ4အစိတ်အပိုင်း အားလုံး ရောနှော အပူ နိ မ့်ကျော် အပူ နေကြသည်။ အရည် သည် ထူ ထဲ သော အခြေအနေသို့ ပြုတ် သွားပြီး အသွင်အပြင် တွင် каша နှင့် ဆင်တူ သည်။
အသုံးပြုခြင်း ၏ နည်းလမ်း သည် ламинирование желатином နှင့် မတူ ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို исправить မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကိုလည်း ထပ်ခါတလဲလဲ ရပါ မည်။
ဆံပင် ကြီးထွား မှုကို အား ဖြ ည့်Касторовое масло ကို ကြာ မြင့် စွာ ကတည်းက အသုံးပြု ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤ သဘာဝ နှင့် စျေး သိပ်မ ကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများ သည် စေး ကပ် ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်နည်းများ တွင် ပါ ၀ င လာသည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အ ဘို့ အ ဖွဲ့စည်းမှု ၏ ပြင်ဆင်မှု ထက် ပို5မိနစ် ယူ ပါ လိမ့် မယ်။ ဆီ ဇွန်း တစ် ဇွန်း၊ Майонез စံ ဇွန်း ၂ ခု၊ ကြက်ဥ တစ်လုံး နှင့် အ ဆီ နည်း သော က ဆီ ဖါ လေး တို့ကို ယူ ပါ။ အားလုံး အစိတ်အပိုင်းများ ရောနှော နေကြသည်။
ဒီ ဖွဲ့စည်းမှု အ မြစ်များ မှ ကြီး စွန်း တိုင်အောင် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည် — ဤ သည် အခြား အလားတူ မျက်နှာဖုံးများ နှင့် ၎င်း၏ ကွာခြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို ကြိုတင် ဆေး ပြီး အနည်းငယ် စို စွတ် အောင် ပြုလုပ် သင့် သည်။ ဆံပင် သည် ဦး ထုပ် အောက်တွင် ရှိပြီး မျက်နှာ သုတ် ဝါ နှင့် နေစဉ် လုပ်ငန်း စဉ် တစ်ခုလုံး သည် အနည်းဆုံး မိနစ် ပါ လိမ့် မည်။
သည်! မျက်နှာဖုံး ကို ရေ စီး အောက်တွင် ဆေး ကြော ပြီး ဖြစ်နိုင်သည် မှာ အအေး ပင် ဖြစ်ကြောင်း သတိရ ရန် အရေးကြီးသည်။ ဤ သည် ဆံပင် အလွှာ လျှက်ရှိကြောင်း ဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို တိုးမြှင့်ဖို့ ကို ဖြစ်စေ လိမ့် မည်။
ဆံပင်ကို ဆေး ကြော သောအခါ, အ ရော အ နှော ဆေး ကြော ဖို့ စတင် ဒါ အချိန် ကြာ အမျှ လျော့နည်း သိသာ ဖြစ်လာသည်။ အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထား ရန် အ ပို စောင့် ရှောက် မှု ပေးရန် အကြံပြု သည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အ ပြီး ရက်အနည်းငယ် လောက် ဆံပင် မ ဆေး ပါ နဲ့။
နူးညံ့ သော ဆံပင် နှင့် ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို သာ သုံး ပါ။
လာ မ ယ့်၇ ရက်အတွင်းမှာ အသားအရေ ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် နဲ့ ပုံမှန် သုတ် ပေးပါ။
အ ရက် ပါ သည့် အ ရက် ပါဝင်သော ချွဲ ဆေးများ မ သုံး သင့် ပါ။
ဆံပင် ဆိုးဆေး နှင့် ခြောက်သွေ့ ခြင်းကို ရှောင် ပါ။
သဘာဝ ပစ္စည်း щетина နှင့် အတူ ဖြီး ကို သုံး ပါ။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကို မ ပြုသည် ဖြစ်စေ မ ဆံပင်ကို ဤ ဖြင့် ဂရု ပြု သင့် သည်။ ဆံပင် ၏ တည်ဆောက် ပုံ ကို ပျက်စီး စေ နိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှု များ နှင့် က အကာအကွယ် ပေး သည့် ကိရိယာများ မရှိပါ။
ဆံပင် ламинирование ၏ အကျော်ကြားဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု မှာ желатин ကို အသုံးပြုထားသော မျက်နှာဖုံး ဖြစ်သည်။ ဂျယ် လတ် နင် ကို ကိတ် မု န့ ်များ နှင့် အခြား သကြားလုံး များ နှင့် ပေါင်းစပ် ဖွယ်ရှိ သည်၊ သို့သော် ထုတ်ကုန် သည် ဆံပင်ကို မိုး လေ ၀ သ မှ ဆောင်းတွင်း ကဲ့သို့သော ဆံပင်ကို ကာကွယ်နိုင် သည်၊ ဂျယ် လတ် တွင် အဓိကအား ဖြင့် အ မိုင် နို အက် အ နို အက်ဆစ် များ (глицин) နှင့် пирролидин တို့ ပါဝင်ပြီး လူ အများစုသည် ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သော ပမာဏကို စားသုံး ပါ။ အ ဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် အရိုး၊ အရိုး နု၊
ဤ အော်ဂဲနစ် ဒြပ် ပေါင်း များသည် ဆံပင် နှင့် လက်သည်း တို့၏ တိုးတက်မှု အတွက်သာမက အကောင်းဆုံး ကိုယ်ခံစွမ်းအား နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် တို့ကို ပါ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ желатин အ မှု န့်တွင်ရှိသော အ မိုင် ပုံ ၁ ပုံ ဖြစ်သော Аминоэтан သည် ရောင် ရမ်း စေ သည့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကုသ ရာတွင် မြှ င့ နိုင်သည် ဟု သက်သေ ပြသည်။ желатин ၌ ပါ ၀ င်သည့် Глицин သည် ပိုမို လွယ်ကူစွာ အိပ်စက်ခြင်း ကို ကောင်းမွန် စေသည်။ ဂျယ် လတ် မျက်နှာဖုံး များသည် အခြေခံ အား ဖြင့် ဖြော င့ ်။ «တောက် ပြောင် သော» ဆံပင် ပုံရိပ်ကို ဖန်တီး ပေးသည် ဆံပင် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ထိတွေ့ မှု ၏ ရလဒ် အတော်လေး သိသာ ပေမယ့ ်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် желатин အလွန်အကျွံ သုံးစွဲရန် မ လိုအပ် ပါ။ သို့မဟုတ် ပါ က ပြန်လည်ထူထောင် ရန်အတွက် အချိန် များစွာ လိုအပ် လိမ့် မည်။
ဒီတော့ желатин ကို ဘာ အစားထိုး နိုင် သလဲ
အုန်းနို့ သည် အုန်းသီး မှ ထုတ်ယူ ထားသော အရည် ဖြစ်သည်။ အုန်း ရေ နှင့် ရော ထွေး မ နေ ပါ နှင့်။ ပြီးနောက် ရှိသမျှ တို့, အ ဆုံး စွန် သော အုန်းသီး ခွံ မှ ရရှိသော ဖြစ်ပါတယ်။ အ သီး နှင့် နို့ ထွက်သော ကြောင့် အုန်းနို့ သည် ဂျယ် လတ် အစားထိုး နိုင်သည်။
အုန်းနို့ ၏ အမျိုးမျိုး သည် ၎င်း၏ သိပ် သည်း မှု ပေါ် မူတည် သည်။ အ ထူ ၂၀ မှ ၂၂% အ ဆီ ပါဝင်ပြီး နို့ ရည် ၅% မှ ၇% အထိ ပါဝင်သည်။ ဒီ အ ဆီ အများစုဟာ ပြည့် နှက် နေ တဲ့ အ ဆီ တွေဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ဗီတာမင် C၊ E, B1, B3, B5 နှင့် B6 အပြင် သံ၊ ဆယ် လီ နီ ယမ်၊
ထို့ကြောင့် ၎င်း ချိုမြိန်သော အ ချဉ် ရည် အရည် သည် ဂျယ် လ နိတ် နှင့် မ တ ည့်သော တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်းမာ။ တောက်ပ သော အသွင်အပြင် ကို ရရှိရန် желатин ကို သံလွင် ဆီ ဖြင့် အစားထိုး ပါ။ ဗီတာမင် A, E နှင့် антиоксиданты များ ကြွယ်ဝ သော သံလွင် ဆီ သည် кератин ကို စုဆောင်း ရန် ကူညီ ပေးပြီး ကို ရရှိ စေသည်။
သံလွင် ဆီ သည် кожный жир အလွန်အကျွံ စုဆောင်းခြင်း ကို ရပ်တ န့်စေ နိုင်သည်။ ဤ လုပ်ငန်း စဉ် သည် ဆံပင် အ လှ ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ဆံပင် ကြီးထွား တို့ကို ကာကွယ် ပေးသည်။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အဆီများ ဆေးဖက်ဝင် ဂုဏ်သတ္တိများ နှင့် အတူ အ ပင် များ၏ အနှစ်သာရ ဖြစ်ကြသည်။ ဆံပင်ကျွတ် ခြင်း၊ ချွတ် ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ် ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ် ခြင်း စသည်တို့ကို ကုသရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အဆီများ ရှိသည်။
သူတို့ က ဦး ရေ ပြား တွင် သွေး လည်ပတ် မှုကို တိုးတက် စေပြီး ဆံပင် များ လှုံ့ဆော် ပေးခြင်း အား ဖြင့် ကြီးထွား မှုကို တိုးမြှင့်စေပြီး လတ် ကို ကျန်းမာ စွာ အစားထိုး နိုင်သည်။ ကွဲပြား ခြားနား သော မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အဆီများ ကွဲပြား ခြားနား သော ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသည်။ အချို့က ဆံပင် ခြောက်သွေ့ သူများအတွက် ကောင်းမွန် ပြီး အချို့က кожный жир ပို လျှံ နေခြင်း ကို ဖယ်ရှားပေး သည်။
သဘာဝ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အပေါ် အခြေခံ၍ မျက်နှာဖုံးများ — အဆီများ သို့မဟုတ် အုန်းသီး နို့ များ — ဓာတ် မ တ ည့်မှုများကို ဖြစ်ပေါ် စေသည် မဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ သင့် ဆံပင်ကို အလွန်အကျွံ တော င့ တင်း ထို့နောက် ဆံပင်ကို သင့် ရဲ့ ပုံမှန် အေးစက်။ သို့မဟုတ် ရော နေသော ပန်းသီး сидр ရှ လ ကာ ရည် ဖြင့် ဆေး ပါ။
ဦး ရေ ပြား ထဲသို့ မျက်နှာဖုံး ကို မ ပွတ် ပါ နှင့်၊ ၎င်းသည် ယား ယံ စေပြီး ချော မွတ် ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
ရေ ရေချိုးခန်း တွင် အ ဖြေ တစ်ခုကို ပြင်ဆင် သည့် အခါ (ဥပမာ — ပျားရည် အရည် ပျော်စေ ခြင်း (သို့) မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ရေ နံ ကို အပူ ပေး သည့် အခါ) အနှစ်သာရ သည် ရေ ပါ စေ။ သို့မဟုတ် ပါ က ၎င်းသည် ၎င်း၏ အသုံးဝင်သော ဂုဏ် သတ္တိ အားလုံးကို ဆုံးရှုံး လိမ့် မည်။
အ ရော အ နှော များအားလုံး ပါဝင်သော အရာများကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်း ပစ်။ блендер သို့မဟုတ် миксер ကို သုံး ပါ။ ဒီ အ ရော အ နှော ကို သင်၏ ဆံပင် ကပ် ထား လို့ ရော အ နှော တွေနဲ့ မ သုံး တာ က ပိုကောင်းတယ်။
တိ ကျသော အကြောင်းပြချက် မရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အကြာတွင် ပင် ၏ မပေါ် ပါ က трихолог နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ဖြစ်နိုင် သည့် ကျန်းမာရေး ပြ возможно နာ များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ် နိုင်သည်။
ဆံပင်ကို ညှပ် ရန်အတွက် မည် သည့် မျက်နှာဖုံး ကိုမဆို ၁ ပတ် / ၂ ပတ် အသုံးပြု သင့် သည်။ အချိန် ကို သုံး ပါ — အနည်းဆုံး ၃၅-၄၅ မိနစ်။
1 столовая ложка က မာ မ လီ ယာ ဆီ။
1 столовая ложка သံလွင် ဆီ။
ရေ နံ တစ်ခွက် (၂၅၀ မီ လီလီ တာ) ရှိသော ရေ တွင် ပျော် ဝင် ပါ။
အ ရော အ နှော ကို ရေ ရေချိုး (သို့) မိုက် က ရို ဝေ့ ဗ် ပေးပါ။
ဆံပင် ကောက် ကောက် သို့ ညင် ညင် သာ массаж။
မိနစ် ၄၀ ကြာ ဘေးဖယ်ထား ပါ၊ ကလေး ခေါင်း လျှော် ရည် နှင့် ဆေး ပါ။
ဒါဟာ သတိပြုပါ ရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ပါတယ် ဂျပန် အမျိုးသမီးများ အ ကြား ဆံပင် ကျန်းမာရေးအတွက် Камелия ဆီကို သုံး လေ့ ရှိသည်။ Гейши သည် ၎င်းကို သုံး၍ တောက်ပ သော ရိုးရာ တောက်ပ သော ဆံပင် ကောက် ကောက် များကို ရရှိသည်။
Камелия နှင့် သံလွင် ဆီ တို့၏ ကုသ နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများ ကြောင့် ထွက်ခွာ ခြင်းသည် ဆံပင်ကို သိသိသာသာ ပျော့ ပြောင်း စေပြီး эффект ламинирования ကို ဖြစ်စေ နိုင်သည်။ ဆံပင် တွင် အ စို ​​ဓာတ် ကို ထိန်း ထား နိုင်ခြင်း၊
မည် သည့် ဆေးဆိုင် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ စုဆောင်းခြင်း။
1 столовая ложка အုန်းနို့။
၁ Чайная ложка ကို ကို ထောပတ်။
2 ст. Л. မ ဆို ပျားရည်။
ဒီ တစ်ကြိမ် မှာတော့ လန်းဆန်း တဲ့ ရေ ပူ အစား, сбор трав ကို базовая брюнетка အဖြစ် သုံး ပါ၊ ဆူး ပင် ဆံပင် ရှိ မိန်းကလေးများ နှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ромашка သည် သင့် တော် သော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပြီး၊
အ ခြောက် ခံ ထားသော မြက် ၂ ဇွန်း ကို ယူ၍ ရေ ပူ ဖြင့် ဖြ ည့်ပါ။
ထို့နောက် နာရီဝက် ခန့် ကြာအောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အရည် ကို သုံး၍ ပျားရည်၊ ကိုကိုး ထောပတ် နှင့် အုန်းသီး နို့ များကို ပျော် ဝင် စေသည်။
ထောပတ် နှင့် ပျားရည် ကို ကိုကိုး စုဆောင်းခြင်း တွင် သွင်း မီ အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခု လုံး ကို မိုက် က ရို ဖ် မီးဖို ၌ ထည့် ပြီး ထူ တုံး ဖြင့် အရည် ပျော် ပါ။
အခြား ပါဝင် ပစ္စည်းများတွင် ထောပတ် နှင့် နို့ ကို ထည့် ပြီး ရောနှော ပါ။
ဆံပင် ကောက် ကောက် နှင့် အုပ်စုခွဲ ကြီး စွန်း သို့ အ နှိပ်။
၄၅ မိနစ် ခန့် ထားပါ
парабен အခမဲ့ ခေါင်း လျှော် ရည် နှင့် ဆေး ပါ။
3 столовые ложки ပူ နွေး သော ရေ။
1 ст. Л. သံလွင် ဆီ။
မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဆီ ၃-၄ ဘူး (Лаванда, နှင်းဆီ သို့မဟုတ် ваниль)။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကို ရေ ပူ တွင် ပျော် ဝင်ပြီး သံလွင် ဆီ ထည့် ပါ။
အနည်းငယ် အေး ရန် အ ရော အ နှော ထားခဲ့ပါ။
ထို့နောက် ၎င်းကို စို စွတ် သော ဆံပင် များ၊ အထူး သ ဖြင့် စွန်း တိုင်အောင် ထားပါ၊ ရေ စို ခံ ပါ။
မျက်နှာဖုံး ကို မိနစ် ၃၀ မှ ၄၅ မိနစ် ခန့် ထားပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ ဆံပင်ကို ခေါင်း လျှော် ရည် ဖြင့် ဆေး ပါ။
ဆံပင် ၏ အခြေအနေ နှင့် သင်၏ ပန်းတိုင် များ အ ပေါ်မူတည်ပြီး သ ငျ သ ညျ အကျိုးသက်ရောက်မှု်တင်ရန် အ ဘို့ အ ရောနှော အမျိုးမျိုးသော မရှိမဖြစ် နိုင်သည်:
သွေ့ ခြောက် သော. кипарис, шалфей နှင့် розмарин စ သည့် အဆီများ ကို အသုံးပြု ပါ။
ဆံပင် ခြောက်သွေ့ ရန်အတွက် နှင်းဆီ၊ စန္ဒကူး၊ иланг-иланг, лаванда နှင့် герань တို့ကို ကြိုးစား နိုင်သည်။
သင် ဆုံးရှုံးမှု ကို တားဆီး လိုပါက Розмарин၊ Чайное дерево ဆီ သို့မဟုတ် пачули စ သည့် အဆီများ ကို ထည့် ခြင်း က ပို ကောင်းသည်။
ခြောက်သွေ့ ခြင်း၊ ချော ကျိ ကျိ ရှိခြင်း၊ မှိုင်း ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း ဆံပင် ကောက် ခြင်းများ ရှိပါက တွင် တွေ့နိုင် သော ထုတ်ကုန် များသည် သူတို့၏ အခြေအနေကို ပြန်လည် ကူညီပေး လိမ့် မည်။ ဆံပင် ламинирование များအတွက် အိမ် မျက်နှာဖုံး သည် ၎င်း၏ ချွန် ထက် အတွက် ကွဲပြား ခြားနား ပါဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ကို အပြင်, သင် နှင့် သင်၏ ဆံပင် ကောက် ကောက် များအတွက် ပိုမို သည်။
အိမ်သုံး ၏ အဓိကအား သာ ချက်မှာ သင်၏ ဆံပင် ၏ လိုအပ်ချက် နှင့် ကိုက်ညီ သည်အထိ ламинирующая маска ဖြင့် စမ်းသပ် နိုင် ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တွင် ကြိုး မျှင် များကို အထူး ရောနှော ခြင်း အုပ် ခြင်း ပါဝင်သည်။ ၎င်း အစိတ်အပိုင်းများ တွင် ဆံပင် တစ်ခု စီ ကို မမြင်ရသော ပါး လွှာ သော ဖုံး ဖြင့် ဖုံး အုပ် ထားသည်။ ဆံပင် ပုံစံ ထုတ်ကုန် များ နှင့် ပစ္စည်း ကိရိယာ များ၏ ဆိုးကျိုးများ မှ ကာကွယ် ပေးသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု သည် ပူပြင်းသော ဖြော င့်ဖြော င့်ခြင်း နှင့် ဆင်တူ သည်။ ဆံပင် က ချောမွေ့ သည်၊ လှပပြီး တောက်ပ သည်။ သို့သော် ဆံပင် ကောက် ကောက် သည် ကုထုံး သာမက အကာအကွယ် လည်း ဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
ထို နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ဆံပင် တစ်ခု စီ ကို အလွှာ များကို ပေါင်းစည်း ခြင်း ဖြင့် ၎င်း၏ မျက်နှာပြင် ကို ညီ အောင်လုပ် အသက်ရှူ နိုင်သော ဖ လင် ဖြင့် ဖုံး ထားသည်။ ламинирование နှင့် မတူဘဲ, အိမ်မှာ ဆံပင် ၏ ороговение кератином နှင့် အတူ ရွှဲ ဆိုလို, ဒါ ကြောင့် пряди နာ ခံမှု ဖြစ်လာသည် နှင့် ပင်, သို့သော်, ဒီ ပစ္စည်း ဥစ္စာ လျင်မြန်စွာ ဆေး ကြော နေသည်။ နောက်ထပ် အခြေခံ ကျသော ခြားနားချက် မှာ ороговение အတွက် ဖွဲ့စည်းမှု တွင် формальдегиды ပါ ၀ င်ခြင်း ကြောင့် ဆံပင် ၏ ကို မကြာခဏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင် သည်။
ပါး လွှာ သော၊ မှို၊ ခြောက်သွေ့။ ညစ်ပတ်သော ဆံပင် ရှိ သည့် မိန်းကလေးများအတွက် အကာအကွယ် ပေး သည့် ဆေးဝါး အသုံးပြုရန် ကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပြု သည်။ လိုင်း အလွှာ အတွက် ဂျယ် လ် သည် မကြာသေးမီက ကြိုး များကို စွန်း ထွင် သူများ၊ အပြင်ထွက်၊ ကောက် ကောက်၊ ဆံပင် ကောက် ကောက် များရှိ သည့် မိန်းကလေးများအတွက် အသုံးဝင် လိမ့် မည်၊ ၎င်းကို ပုံစံ ထုတ်ကုန် များ၏ ဆိုးကျိုးများ မှ ကာကွယ် ပေးသည်။ အခြား အလွှာ ရှိ အ ဘယ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို မျှော် လင့် သင့် သနည်း။
အဆုံးများကိုမမြင်ရသောအရာ (အိမ်တွင်ဆံပင်၏ biolamamination ကိုစနစ်တကျပြုလုပ်လျှင်၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျက်စီးသွားသောအဆုံးများသည်သူတို့ဘာသာသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားမည်),
ဆံပင်များပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သန်စွမ်းကျန်းမာဖြစ်လာသည် (ရိုးရာကုထုံးနှင့်အတူဆံပင် lamination ထွက်သယ်ဆောင်လျှင်, တစ် ဦး မတည့်တုံ့ပြန်မှုအာမခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ) ။
စည်းကမ်းအနေဖြင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ကိရိယာကိုအရောင်သို့မဟုတ်အရောင်ဂျယ်လ်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ပထမဆုံးရွေးစရာကိုရွေးချယ်သောအခါသေံသည်သင်၏သဘာဝအရောင်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာ
သင်၏ခေါင်းကိုအာဟာရဖြစ်စေသောမျက်နှာဖုံးဖြင့်ဖုံးထားပါ။ lamination များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးလျှောက်ထားပြီးနောက်, ဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအစိုဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုဖွင့်ပြီးနောက်သင့် ဦး ခေါင်းကိုနွေးပါ (သင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်မည်မဟုတ်) ။ အနည်းဆုံး ၅ မိနစ်ကြာသင့်သည်။ အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်။
မည်သည့်အလှပြင်ဆိုင်တွင်မဆိုဆံပင်အတွက်ကုသမှုပြုလုပ်ပေးသည်၊ သို့သော်မိန်းကလေးတိုင်းသည်သူတို့၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ ဤကိစ္စတွင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာအိမ်တွင်လမိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာ ၀ ထုတ်ကုန်များ၏အကူအညီသို့မဟုတ်အထူးပြုထားသောစတိုးဆိုင်များတွင်သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်သောထုတ်ကုန်များဖြင့်သင်၏သော့ခတ်ထားခြင်း၊ အသံအတိုးအကျယ်နှင့်နာခံခြင်းတို့ကိုရရှိခြင်းဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ အိမ်တွင်ဆံပင်ကိုဘယ်လိုသန့်စင်ဆေးကြောရမည်နည်း။
အိမ်တွင်ပြုလုပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီးရလဒ်ကောင်းများရရန်အတွက်၎င်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုဆေးဆိုးရန်သင်စီစဉ်ထားပါက၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆံပင်မျက်နှာဖုံးတွင် gelatin ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဖက်လက္ခဏာများမရှိဘဲပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖော်စပ်သည့်ဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါသည် gelatin ဖြင့်အိမ်တွင်းဆံပင် lamination ပြုလုပ်ရန်အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ရေမွှေးမပြုလုပ်မီစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော gelatin အရောအနှောကိုကမ်းနားလမ်းသို့ဖြန့်ဖြူးပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်စောင့်ပါ။ သုတ်ပါ။ အကယ်၍ မီးလောင်ခြင်းရှိလျှင်ယားယံခြင်းမဖြစ်နိုင်လျှင်သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ အိမ်တွင်ဆံပင်ကိုညှပ်ပေးခြင်းသည်အချို့သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရဲ့စုစုပေါင်းကြာချိန်က ၂-၃ နာရီဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်အခမဲ့နေ့တွေမှာလုပ်တာကပိုကောင်းတယ်၊
gelatin ဖွဲ့စည်းမှုသည်ဆံပင်များကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဦး ခေါင်းသည်ထူ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီးထုတ်ကုန်သည်ဆံပင်ကိုအလေးမထားသည့်အပြင်ဆိကြည်ဂလင်းများများလွန်းခြင်းကြောင့်အလုပ်လုပ်သောမိန်းကလေးများအတွက်လည်းသင့်လျော်သည်
ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်အလှကုန်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်မျှင်များ၏ gelatin အပေါ်ယံအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်, shampooing ပြီးနောက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်
gelatin သည်ဆံသားကိုအစိုဓာတ်ထိန်း ပေး၍ နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။
အိမ်၌တပ်မက်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ဆေးမျက်နှာဖုံး၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဒီပုံစံကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် —
2 Tsp ပြင်ဆင်ပါ။ gelatin, 1 Tsp ။ Castor သို့မဟုတ်အုန်းဆီ, ရေ 30 ml ။
ပါဝင်သောအရာအားလုံးကိုကောင်းစွာရောနှောပါ၊ ကွန်တိန်နာကိုရေရေချိုးထဲ၌ထည့်ပြီး gelatin လုံးဝဖျက်သိမ်းသည်အထိ၊ အမြဲတမ်းမွှေပေးပါ။
gelatin mask သည်အေးသွားသောအခါ၎င်းကို strands များသို့စတင်အသုံးပြုပါ။ အမြစ်များမှထိပ်ဖျားများသို့ရွေ့လျားပါ။ သင်ဖြီးကို အသုံးပြု၍ ဖွဲ့စည်းမှုကိုအညီအမျှဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
သင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်ပလတ်စတစ်အဖုံးကို တင်၍ သင်၏ခေါင်းပေါ်ကိုပုဝါနှင့်ပတ်ရစ်သည်။
တစ်နာရီအကြာတွင် (ခေါင်းလျှော်ရည်မပါဘဲ) ရေနံမျက်နှာဖုံးကိုဆေးကြောပြီးပုံမှန်လမ်းအတိုင်းခြောက်သွေ့ပါ။ ၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသဖြင့်အပတ်စဉ်လုပ်ပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအရ lamination များအတွက်ကုထုံး gelatin ဖွဲ့စည်းမှု strands နာခံမှု, တောက်ပ, ချောမွေ့စေသည်။ gelatin နှင့် balm ပါသောဆံပင်မျက်နှာဖုံးသည်သပ်ရပ်သောအသွင်အပြင်ကိုလိုချင်သောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်သင့်တော်သည်။ ဆံပင်တိုများအတွက်လည်းသင် lamination ထုတ်ကုန်အနည်းငယ်ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ မျက်နှာဖုံးစာရွက်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် —
၁၀ မီလီဂရမ်ဂျယ်လတ်၊ ရေ ၃၀ မီလီမီတာ၊ ဆံပင်ဖျော်ရည်၏တူညီသောပမာဏကိုယူပါ။
gelatin ပူနွေးသောရေနှင့်သွန်းလောင်းတစ်ဇွန်းနှင့်အတူရောနှောခြင်းနှင့် 10 မိနစ်ရောင်ရမ်းဖို့ထားခဲ့ပါ။
တစ်နာရီအကြာတွင်ခေါင်းလျှော်ရည် / ဗလပ်စ်မသုံးဘဲမျက်နှာဖုံးကိုသုတ်ပါ။
သင်၏ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ၊ သံဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးလေမှုတ်စက်သို့မဟုတ်အခြားပုံစံထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်မျက်နှာဖုံးလုပ်ပါ။
ကုသမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို stylist များနှင့်ဆံပင်ညှပ်သမားများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ အွန်လိုင်းမှမှာယူခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအရအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုအမေရိကန်၊ ဂျာမန်နှင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီများကကမ်းလှမ်းသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ရုရှားကုမ္ပဏီများမှကနေဆံပင် laminating များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် tool ကိုလည်းအလွန်ရေပန်းစားသည်။ အိမ်တွင်သုံးနိုင်သည့်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ။
Estel OTIUM ဇီဝ Crystal ။ အစုံတွင်မူလတန်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်ခေါင်းလျှော်ရည်၊ အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါသောအညိုရောင်ဂျယ်လ်၊ ဆီဆေးပြုပြင်ခြင်းနှင့်သွေးရည်ကြည်ဆေးကြောခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုမျှဝေထားသော်လည်းသိသိသာသာပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အချက်များရှိသည်။ Estelle Bio Crystal ဒြပ်ပေါင်းများ၏ Lamination Effect ကိုအသံထွက်ထုတ်ပေးသော်လည်းအမြဲတမ်းကြာရှည်ခံမှုမရှိပါ (ဆံပင်၏တည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်သည်) ။
Matrix အရောင်။ ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်သူသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ပိုမိုအစွမ်းထက်သောဆေးကိုထုတ်လုပ်နေစဉ် Matrix laminating အတွက် Professional အလှကုန်များသည်သင့်အားဆံပင်၏ထူးခြားချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
Lebel အလှကုန်။ ပျော့ပျောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူဂျပန်ဇီဝလိုင်းမင်းသား ၎င်းနှင့်အတူသင်သည်ကြိုးမျှင်များကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူစီစဉ်နိုင်သည်။ ရောစပ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းချက်ချင်းအသုံးပြုရန်အတွက်အသင့်ဖြစ်သည့်စိုထိုင်းသောအရောင်ရှိသောဂျယ်လ်ပုံစံကိုပြင်ဆင်သည်။
အရောင် Prefal ဂျယ်လ်။ ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်မိန်းကလေးတိုင်းသည်မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလေသံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်အထိကျယ်ပြန့်သောအရောင်တောက်ပမှုကိုပေးသည်။ အများအားဖြင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များပါဝင်သောထုတ်ကုန်သည်ဆံပင်များကိုဖုံးအုပ်ပေးပြီး၎င်းတို့ကိုအရောင်ခြယ်နေစဉ်၎င်းသည်ကြိုးများကိုခိုင်ခံ့စေသည်၊ elastic နှင့်နာခံမှုရှိသည်။
Moltobene အရောင်အက်ဆစ်။ ဆေး၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ဆိုးသောဆံပင်အရောင်နှင့်အရောင်တောက်ပမှုကိုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည်ပါဝင်သောကြောင့်ဆံပင်ကိုနူးညံ့စေခြင်း၊ ဆံပင်တစ်ခုချင်းစီ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်နိုင်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်ဖိုးရှိသောအရာများဖြင့်အာဟာရရရှိသည်။
အမြဲတမ်းမွေ့လျော်။ အိမ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အလွှာအတွက်အီတလီဖွဲ့စည်းမှု။ ဆံပင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သူများအဖို့သင့်တော်သည်။ ခွဲထားသောအစွန်အဖျားများကိုခွေခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းအပြီးပုံကိုအနာပျောက်စေလိုသူများအတွက်သင့်တော်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ရန်ပုံငွေများကို ၁-၂ ပတ်တိုင်းတစ်ကြိမ်အသုံးပြုရန်ကျွမ်းကျင်သူများကအကြံပေးသည်။
concept ကိုစမတ် lamination ။ အဆိုပါရှုပ်ထွေးသောမှာအလွန်ပျက်စီးသွားသောဆံပင်ကိုလျှင်မြန်စွာနှင့်နက်ရှိုင်းစွာပြန်လည်နာလန်ထူပေးသည့်ထုတ်ကုန်သုံးမျိုးပါဝင်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအိမ်တွင်ပြုလုပ်ရန်မခက်ခဲပါ၊ မကြာသေးမီကကြိုးမျှင်ခြယ်ထားသောသို့မဟုတ်လင်းလက်စေသည့်သူများထံသို့သယ်ဆောင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသည်ဆံပင်ကို“ တံဆိပ်ခတ်” ပေးပြီးရုပ်ဆိုးသောအဆုံးများကိုဖယ်ရှားပြီးထိတ်လန့်တောက်ပသော၊ နာခံမှုရှိစေသည်။
Kemon ဆံသားသည်အတွင်းပိုင်းမှဆံပင်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ အပူမျက်နှာဖုံး၊ lotion နှင့် balm တို့ပါဝင်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အချို့သောကျွမ်းကျင်မှုများရှိခြင်းကိုမဆိုလိုပါဖြစ်သောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်အိမ်၌ပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Barex ။ ဆံပင်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပစ္စည်းများ ၄ ခုပါဝင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအရ Barex သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ကျွေးရန်လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာဆေးသည်သိသာထင်ရှားသည့်ကုထုံးသက်ရောက်မှုကိုပြသသော်လည်းအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်၏သက်တမ်းကိုအာမခံချက်မပေးချေ။
ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်မတူညီသောဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ကြသောကြောင့်သူတို့အသုံးပြုခြင်းသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လာမည့်ဆေးမတိုးမီလာမီအညွှန်းစာသားနှင့်ပါတ်သက်သည့်ညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာဖတ်ရှုရန်အရေးကြီးသည်။ စည်းကမ်းချက်အရပစ္စည်းအစုံပါ ၀ င်သည့်ရန်ပုံငွေအားလုံးသည်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုသင်စာရွက်နှင့်အညီရောနှောနေစရာမလိုပါ။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုသင်လိုချင်သောအစီအစဉ်တွင်ပါရှိသည့်အမြန်များသို့ချက်ချင်းလျှောက်ထားရမည်။ အိမ်တွင်းဆံပင်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာများ သုံး၍ မည်သို့လွမ်းရမည်နည်း —
ကိရိယာအစုံတွင်ပါ ၀ င်ပါကကြိုးများကိုအရောင်တောက်စေသောဒြပ်ပေါင်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ။
ချက်ချင်းပင်အပေါ်ဘက်အာဟာရဖြည့်ထားသောမျက်နှာဖုံးကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုအရှည်တစ်ခုလုံးကိုညီမျှစွာဖြန့်ဝေပါ။
သင့်ရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုအဓိကတက်ကြွသောဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ။
1-2 ပတ်တိုင်းတစ်ကြိမ် phytolamination ပြုလုပ်ပါ။
ဆံပင်တစ်ချောင်းစီကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အထူးဖွဲ့စည်းမှုဖြင့်ကြိုးမျှင်များကိုဖုံးအုပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ်နားလည်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဆံပင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့တောက်ပ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသည်၊ ကောင်းမွန်စွာဂရုစိုက်ပြီးနာခံမှုရှိသည်။
ဆံပင်ထူ, ပျော့ပြောင်းပြီး, ဖြီးသည့်အခါလျှပ်စစ်မပေးပါဘူး,
gelatin-free lamination လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကိုယ်ဝန်နှင့်မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုကလေးငယ်ကိုနို့တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။
သာသင်အိမ်မှာ lamination ၏ရလဒ်ကိုဖြေပါ ထို့ကြောင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလေ့လာပြီးအကြံပြုချက်များအားလုံးကိုလေ့လာပြီးနောက်၎င်းကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အဆိုပါ lamination လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်တစ် ဦး ချင်းစီသည်နှင့်ဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မည်သည့်ရလဒ်မျှသင်မမြင်နိုင်ပါ။
အေးဂျင့် lamining တစ်ခုမတည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤ (သို့) ကျွမ်းကျင်သူများကိုအသုံးမပြုမီစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ရှိသို့မဟုတ်နားနောက်ဘက်ရှိအရေပြားကိုဖွဲ့စည်းမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ပါ၊ ၁၅ မိနစ်ခန့်စောင့်ပါ။ အကယ်၍ နီရဲခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းမရှိပါကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်ပါ။
အိမ်တွင်အညစ်အကြေးစွပ်ရန်အတွက်မျက်နှာဖုံးလုပ်ရန်မလွယ်ကူသော်လည်းရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းအချို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်အခြေခံအကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များပေးပါသည်။
မျက်နှာဖုံးကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ပလပ်စတစ်အဖုံးကိုသေချာတပ်ပါ , အားဖြင့်အများဆုံးဖန်လုံအိမ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီး။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်ဆံပင်ထဲသို့ကောင်းစွာစုပ်ယူပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ t
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်နိုင်ရန်သင်သည်အထူးစင်တာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်၏ရန်ပုံငွေများကိုကောက်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ Estel မှအလှကုန်ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်သောဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိရိယာတန်ဆာပလာမဆိုဓာတ်ပုံများပါ ၀ င်သည့်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သည်ကိုသတိရပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းတွင်ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အိမ်တွင်းရောနှောခြင်းများထက်ပိုမိုကြာရှည်သည်ကိုသတိပြုပါ။
Estelle ဆံပင်ဆိုးဆေး (ထုတ်လုပ်သူမှထောက်ပံ့ပေးလျှင်) ။
အစုံပါသောနက်ရှိုင်းသောသန့်စင်ဆေးဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုဆေးကြောပါ။ ကျန်ရှိသောအမဲဆီ, ပုံစံထုတ်ကုန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
တစ် ဦး အရောင်အေးဂျင့်ရှိလြှငျ, ကပထမ ဦး ဆုံးလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည် (အရောင်မရှိသောအလွှာသည်ဤစာပိုဒ်အတွက်မဖော်ပြထားပါ) ။
Laminating ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြုလုပ်ပါ။ အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ ထားပါ ညွှန်ကြားချက်အတိအကျအချိန်ညွှန်ပြမထားဘူးဆိုရင်။
ဆံပင်ကောက်ကောက်, ဖြန်းနှင့် lay ။
အကယ်၍ သင်ဆံပင်ကိုအရောင်ချယ်ထားပါက၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ Estelle Newton mask ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်အလင်းရောင်နည်းနည်းသက်သာစေသည်။ ကကြိုး၏အရောင်သည်ပိုမိုပြည့်နှက်လာပြီးအမှိုက်သရိုက်များကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်သွားပါလိမ့်မည်။
စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုမူကွဲ express ကို lamination ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အိမ်တွင်ဆံပင်အတွက်အထူးမှုန်ရေမွှားပေးသည်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်
သင်၏ဆံပင်ကိုလျှော်ရန်လုံလောက်သည်၊ ထို့နောက်ရေဆေးဆေးကိုဆေးကြောထားသောဆံပင်တွင်လိမ်းပြီးသေးငယ်သော scallop ဖြင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ထားပါ။
ရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများဖြင့်အိမ်တွင်းအလွိုင်းသည်ဆံပင်၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်လို။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ငွေစုလိုသောအမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ် — အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အလှအပ။
ချောမွေ့သည်အထိမုန်ညင်းအမှုန့်နှင့်ကြက်ဥတစ်ရွက် (ကြက်၊ ဘဲသို့မဟုတ်ငန်း) ၁ ကိုမွှေပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အမှုန့်တွေကုန်အောင်လုပ်ပြီးဒြပ်ထုက creamy ဖြစ်လာမချင်းခြောက်သွေ့တဲ့မုန်ညင်းကိုဖြည်းဖြည်းထည့်ပေးပါ။
အရောအနှောအားဆံပင်ထဲသို့နှိုက် လိုက်၍ အထူတုံးလုံးနှင့်အတူအရှည်တစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ဝေသည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုဆဲလ်လန်းဖန်းဖြင့်ထုပ်ပြီးနွေးထွေးသောသုတ်ပဝါနှင့်ပတ်ထားပါ။ မျက်နှာဖုံးကိုမိနစ် ၄၀ မှ ၆၀ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်သုံးပါ၊ ပြီးလျှင်ခေါင်းလျှော်ရည်မသုံးပါနှင့်။
kefir ၏အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများအချိန်ကြာမြင့်စွာလူသိများခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်ဆံပင်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီး ၅-၇ မိနစ်ခန့်ထားနိုင်သည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်ဆံပင်ပုံစံကိုကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်စေရန်၊ ဆံပင်ကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လာစေရန်၊ အသေအချာပြင်ဆင်ထားရန်၊ ကောင်းမွန်သောတောက်ပမှုနှင့်တောက်ပမှုကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
kefir (4 tbsp ။ ), ကြက်ဥတစ်လုံးနှင့် mayonnaise (2 tbsp) ပေါင်းစပ်ပါ။ ဆံပင်ကိုလိမ်းပြီးဆံပင်ကိုထူထဲစွာဖြီးပါ၊ ဆဲလ်ဖန်းဖန်းဖြင့်ထုပ်ပြီးပလပ်စတစ် ဦး ထုပ်ကိုဝတ်ပါ။ မိနစ် ၃၀ ခန့်ကိုင်ထားပြီးလျှင်ရေဆေးပါ။
ကြက်ဥနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတို့နှင့်ရောနှောထားသောပျားရည် ၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (နေကြာ၊ သံလွင်၊ သို့မဟုတ်ကြက်ဥ — ၁ tbsp ဇွန်း) ။ ဗီတာမင်အေ၊ ဘီ၊ အီးအနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောမျက်နှာဖုံးသည်လိုချင်သောအမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်နှင့်ဆံပင်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုမိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ အထိထားပါ။
အုန်းသီးနို့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရလဒ်ပေးပြီးဆံပင်နှင့် ဦး ရေပြားကိုအကျိုးပြုသည်။
အုန်းနို့တစ်ခွက်ကိုကြွေအိုးထဲသို့ထည့်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိထူသောအလွှာပေါ်လာသည်အထိစောင့်ပါ။ ဇွန်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပါ။ ကျန်ရှိသောနို့ရည်ထဲမှသံပုရာတစ်မျိုး၏ဖျော်ရည်ကိုညှစ်ပြီးသင်ရွေးချယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ (လက်ဖက်ပင်၊ ယူကလစ်ပင်စသည်တို့) ကိုအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောထွေးနှင့်ရေခဲသေတ္တာ။ ဆံပင်အရှည်တစ်လျှောက်လုံးဖြီးဖြန်းဖြန်းဖြန်းထားသောအထူနှင့်ချောမွေ့စွာထားပါ။ ၁ နာရီကြာခံပါ။ သင်၏ဆံပင်ကိုသုတ်ပါ။ ထိုသို့သောမျက်နှာဖုံးအုန်းနို့နှင့်အတူဆံပင်တစ် ဦး silkiness နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုပေးလိမ့်မည်။
အုန်းသီးနို့၏ 0.5 ခွက် များ, လတ် ဆတ် သော ညှစ် သော သံပုရာ တစ်ဝက် ၏ ဖျော်ရည်, 1 столовая ложка ယူ ပါ။ သံလွင် ဆီ ၏ ဇွန်း, 1,5 ст. Л.။ ဓာတ် ၏ ဇွန်း (သံပုရာ ဖျော်ရည် ထဲမှာ ဓာတ် နှင့် ရောနှော ခြင်း နှင့် မရှိဘဲ တစ်သားတည်း ဖြစ်တည်ခြင်း ကိုက်ညီမှု မှ မှေး မှိန်)။ ဤ အ မှု ၌ ဓာတ် သည် ဆံပင် ဖြော င့်အဖြစ် ဆောင်ရွက် သည်။ သံပုရာ — က စီ ဓာတ် အ ရော အ နှော၊ အုန်းနို့၊ ထောပတ် ကို ဇွန်း အနည်းငယ် ထဲသို့ လောင်း ကာ အလယ်အလတ် အပူ ၌ ထားပါ။
အ စဉ် မပြတ် အ ရော အ နှော မွှေ, ဆူ ပွက် စေ ခြင်း ငှါ မ သာ, နွေး သာ။ ဒြပ် ထု ပို ထူ လာ သောအခါ ဆံပင်ကို သန့် ရှင်း စင် ကြယ် ပြုလုပ် ပါ။
ဤ မျက်နှာဖုံး သည် အိမ်တိုင်းတွင် ပြင်ဆင်ရန် လွယ်ကူ ပြီး အိမ်တိုင်းတွင် ထုတ်ကုန် များ ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဆံပင်ကို ချောမွေ့ စေပြီး တောက်ပ စေသည်။
2 столовые ложки ယူ ပါ။ ပျားရည် ဇွန်း, 1 မှ ည့်ငှက် ပျော, 1.5 столовых ложек။ အုန်း ရေ နံ သို့မဟုတ် နို့ ၏ ဇွန်း။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို Блендер ဖြင့် ရိုက် ပါ။ ထို့နောက် ဆန် ခါ ဖြင့် သုတ် ပါ။ မျက်နှာဖုံး က အရမ်း အရည် မ ဖြစ် သင့် ဘူး။ ဆံပင်ကို ခြောက်သွေ့ အောင်လုပ် ပါ။ ထို့နောက် ဆဲလ်ဖုန်း နှင့် မျက်နှာ သုတ် ပု ဝါ ဖြင့် ထုပ် ပြီး ၄၅ ခန့် ကိုင်ထား ပါ။
Желатин မပါဘဲ ဆံပင် ламинирование များအတွက် မျက်နှာဖုံး ဆံပင် တောက်ပ သာမက ဒါပေမယ့် စေ ကူညီပေးပါ မည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဖွဲ့စည်းမှု ကို ပြင်ဆင်ရန်, သင်သည် хмель နှင့် ပိုက် ဆန် အ မြိုး အ နှယျ လိုအပ် ပါ လိမ့် မယ်။ ပထမ အစိတ်အပိုင်း သည် အသံ အ တိုး အကျယ် ကို ပေးသည်၊
1 столовая ложка စိုက်ခင်း လုပ်ကိုင် မည်။ အပူချိန် + ၉၅ ဒီဂရီ စင်တီ ဂရိတ် ရှိ သည့် ရေ တစ်ခွက် တွင် хмель နှင့် льняное семя တို့၏ ဇွန်း။ နာရီဝက် လောက် စိမ် ထားပါ။ သင်၏ ဆံပင်ကို ဆေး ကြော ပြီးလျှင် ဆံပင်ကို ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ နှင့် အတူ နှစ် ခန့် ကြာအောင် ထားပါ။ ကျန်ရှိသော အရည် နှင့် သင်၏ ဆံပင်ကို ဆေး ကြော ပါ။ အမြဲတမ်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရရှိရန်အတွက် ခေါင်း လျှော် ရည် ပြီးနောက် မျက်နှာဖုံး ကို အသုံးပြု ပါ။
ဆံပင်ရှည် များအတွက် မြင့် မား သော Булочка: ဆံပင် ပုံစံ တစ်မျိုး ဖန်တီးခြင်း ၏ အင်္ ဂါ ရပ် များ
ဆံပင် ဆိုးဆေး နည်းပညာအကြောင်း ဒီမှာ ဖတ် ပါ။
အသေးစိတ် အား ဖြင့် အိမ်တွင်း ламинирование волос без желатина အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယို မှာ ပြထားပါတယ်
Хотите бороться с влажностью? Добавьте протеин в свой образ жизни вьющихся волос! Я знаю, каков обычный совет.Я все это видел и слышал, как и ты. И, как правило, когда вы работаете над избавлением от кудрявых волос, вам предлагают сделать следующие3вещи: Корова / Глубокое состояние / Используйте больше крема для волос, яда, яда, ядааа.
Prepoo , чтобы подготовить волосы перед мытьем.
Добавьте белок в свой распорядок дня намеренно.. вот для этого сделай сам!
Волосы уже состоят из белка, но иногда, если наша пищевая диета или продуктовая диета не могут компенсировать этот белок, тогда может помочь дополнительное лечение, такое как этот желатиновый самодельный! Лили говорит: «Единственный тип волос, которому« нужен »белок, — это, как правило, тепло или химически поврежденные (окрашенные) волосы, требующие протеиновой обработки. Вы можете использовать кондиционер глубокого действия с протеином, но обычно девственным волосам протеин не нужен ».
Если у вас чрезмерно увлажненные волосы из-за использования обычных средств? Времена, когда он кажется «слишком мягким» или не удерживает локоны.Вот и настало время протеина. Если это не так, как в первом видео в этом посте, пора. По моему опыту устранения неисправностей тысячи личных консультаций .
2️⃣ G E L A T I N: содержит гидролизованных белков , что автоматически означает более высокое содержание белка.
Желатин действует быстро, потому что он укрепляет волосы, а также сразу улучшает общий рисунок завитков. Недавно меня вдохновило видео @ingecurls, в котором Инге использует метод чаши; однако этот желатиновый DIY существует с тех пор, как @risasrizos опубликовала свое видео на YouTube еще в январе 2015 года! Она говорит, что это лечение желатином — это экстремальное лечение, поэтому рекомендует делать это раз, каждые , остальные месяцев!
Я? Я не принимаю активно сильные протеиновые процедуры и в основном использую безбелковые продукты.Благодаря этим привычкам я знаю, когда они мне нужны, потому что волосы начинают казаться удлиненными, чем обычно, они высыхают быстрее, чем обычно, и в целом они просто грубые и Фууу. Именно тогда я понимаю, что мне нужен протеин для волос. Я должен признаться, что я совсем не любитель DIY, НО вот законные причины, по которым мое внимание, например, лечение желатином своими руками, привлекает мое внимание:
Для улучшения рисунка локонов — чтобы сделать локоны «плотнее»
Pro Tip : Для более высокой дозы протеина используйте больше желатина и убедитесь, что ваша смесь желеобразной консистенции.То, насколько твердыми на ощупь ваши волосы, также будет служить индикатором уровня белка в вашем желатиновом лечении.
Последующий уход: кондиционер должен быть без протеина или с протеином? В идеале, чтобы сбалансировать белок желатина, вам нужна влага, поэтому используйте безбелковую маску после. Но для высокой пористости, жаждущей протеина, также может помочь маска с низким содержанием протеина. Используйте свое усмотрение.
Рецепт лечения желатином своими руками
Аккуратно распутайте сухие волосы (я использовала Behairful Brush) и разделите на пряди.
Повторите процедуру по всей длине волос, концентрируя маску на участках с наибольшим повреждением или наибольшей пористостью.
После нанесения маски оставьте ее на волосах на 15-45 минут.Продукт БУДЕТ застывать на волосах, поэтому будьте осторожны с волосами, чтобы избежать их ломкости.